” ကိုပေါက် ” ဇာတ်လမ်းရှည် ( အစအဆုံး) – Grab Love Story
မနက်ပိုင်းအချိန် နေထွက်နေပေမယ့် အေးစိမ့်စိမ့်နဲ့မို့ ဂျာကင်ခပ်ပါးပါးတထည်ကို သူဝတ်ခဲ့သည် ။
စိုင်းမောင်မောင်နဲ့သူ ဦးကျင်ဟုတ်အိမ်ကို ရောက်သွားသည် ။
တံခါးခေါက်တော့ လူငယ်တယောက် လာဖွင့်ပေးသည် ။ တံခါးကို ဟတယ်ဆိုရုံလေး ..
သုန်မှုန်တဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ ဒီလူငယ်လေးကို သူ့စိတ်ထဲမှာ မနှစ်မြို့ဘူး ။
“ ဆရာဟုတ်ရှိလား ..”
“ မရှိဘူး..ခရီးသွားတယ် …”
လူငယ်လေးက မေးတာတွေကို ဖြေချင်ပုံမရ ။ ကပ်ရက် တဖက်နိုင်ငံဖက်ကို ညွှန်ပြပြီး တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်သည်။
“ အဲဒီချာတိတ်က ဘယ်သူလဲ..”
သူမေးတာကို စိုင်းမောင်မောင်က “ ဆရာဟုတ်ရဲ့တူတယောက်ဘဲ …ဟင်းဟင်း…လေသံကတော့ တွေ့တဲ့အတိုင်းဘဲ..ခပ်မာမာ…ဒီချာတိတ်က ဒေါင့်မကျိုးဘူး…ဟိုစကားလိုပေါ့..ကျားလဲကြောက်ရ ကျားချီးလဲ
ကြောက်ရ ..ဆိုတာလေ …”
“ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ..”
စိုင်းမောင်မောင်က သူ့ကို “ ဆရာဟုတ်..ချင်းမိုင်သွားနေပုံရတယ်…ဆရာမကတော့ တဖက်ကမ်းမှာ
တဲ့..ဘရိတ်ဖပ်စ်သွားစားတာနေမှာပေါ့..ကဲ..ကျနော်တို့ လိုက်သွားရအောင်…” လို့ ပြောသည် ။
သူတို့နှစ်ယောက် တံတားရှိရာကို လျောက်ခဲ့ကြသည် ။
နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်တံတားကြီး ဆီမှာ စည်ကားနေသည် ။ တံတားအလည်ခေါင်မှာ နှစ်နိုင်ငံအလံတွေ တဖျတ်ဖျတ်
တံတားကြီးပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းကူးလာနေတဲ့လူတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ အပြည့်ဘဲ ။ အကောက်ဂိတ်ကင်းတဲလေးက
ယူနီဖေါင်းဝတ်တွေက စိုင်းမောင်မောင်ကို လက်လှမ်းပြကာ နုတ်ဆက်ကြသည် ။ စိုင်းမောင်မောင်က ပြန်လက်ပြ
နုတ်ဆက်ရင်း သူ့ဖက်ကိုလှည့်ပြီး…“ ကျနော့်ကို ခင်မင်ကြတယ်…” လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတဲ့ပုံနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
တဖက်ကိုရောက်တော့ စိုင်းမောင်မောင်က ဆရာမရှိတဲ့ဆိုင်ကို သူသိတယ် ဆိုပြီး ဈေးထဲကိုဝင်ချသွားသည် ။
သူပြောသလိုဘဲ မှန်နေသည် ။ သူခေါ်သွားတဲ့ ကြက်ဆီထမင်းဆိုင်မှာ ဆရာဟုတ်ရဲ့ မိန်းမ ဆရာကတော်
ဒေါ်ရှယ်လီရှိနေသည် ။ သူတို့ကို မြင်သွားသည် ။
သူ့ထက် အသက်နဲနဲကြီးလိမ့်မည် ။ အသားဝင်းဝင်း. လုံးကြီးပေါက်လှလို့ ခေါ်ရမယ့် ကိုယ်လုံးတောင့်တောင့်
မိန်းမ ..။ ရှမ်းတရုတ်..ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ကပြား ဖြစ်မည် ။ စိုပြေတောင့်တင်းတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်
၀တ်စားထားတာတွေက ဆန့်ကျင်ဖက်ယောက်ျားတွေကို ရှိတာတွေ ထုတ်ကြွားထားသလိုဖြစ်နေသည်။
မြင်လိုက်တာနဲ့ ရာဂစိတ်တွေ ဝုန်းကနဲကြွထသွားစေနိုင်တဲ့ ခပ်ထယ်ထယ်စော်ကြီး ။
“ ဆရာမ …”
“ ဆရာဟုတ်ခရီးသွားတယ်ဆို..ဆရာမတို့အိမ်ကို ရောက်ခဲ့တယ်…”
“ အေး…ဟုတ်တယ် …သူမရှိဘူး ..ကဲဆို..ဘာလဲ..စိုင်းမောင်…”
“ ကျနော်ပြောထားတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းလေ…ကိုပေါက်…”
ဆရာမဒေါ်ရှယ်လီက သူ့ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်သည် ။
“ အော်..အေးအေး….ဟုတ်ပြီ..ကိုကျင်ဟုတ်…ငါ့ကို ပြောထားတယ်….အိုကေလေ ..အိုကေအိုကေ ..လာ..လာ..
“ ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ ..”
စိုင်းမောင်မောင်နဲ့ သူ ဒေါ်ရှယ်လီ့ဘေးက ခုံတွေမှာ ၀င်ထိုင်ကြသည် ။
စားသောက်နေတုံး ဒေါ်ရှယ်လီက စိုင်းမောင်မောင်ကို “ မင်းဆရာက မင်းခေါ်လာတဲ့ လူမို့ အစစ စိတ်ချတယ်..
စိုင်းမောင်..မင်းလူက မင်းနံမည်ကိုတော့ ဖျက်မယ် မထင်ဘူးနော…” လို့ ပြောသည် ။
စိုင်းမောင်မောင်က “ စိတ်ချပါ ဆရာမ…..ကိုပေါက်က လူကောင်းပါ ..ကျနော်အာမခံပါတယ်…ဆရာမတို့ စမ်းသုံးကြည့်ပါ …” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီက ရယ်သည် ။
“ အေးပါ..ယုံပါတယ်….ငါက မင်းကို နောက်တာပါ…”
စိုင်းမောင်မောင်က သူ့ကို ဦးကျင်ဟုတ်ဒေါ်ရှယ်လီတို့အိမ်မှာ ထားခဲ့ပြီး ကျိုင်းတုံကို ပြန်သွားသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီက သူ့ကို သူတို့အိမ်အောက်ထပ်က အခန်းတခန်းမှာ နေရာချထားပေးသည်။ စိုင်းမောင်မောင်ကို
ဦးကျင်ဟုတ်နဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီက စိတ်ချရတဲ့လူရှာခိုင်းထားခဲ့တာကြာပြီ ။
သူသည် ဦးကျင်ဟုတ်ရဲ့တူဆိုတဲ့ မျက်နှာထားတင်းမာတဲ့လူငယ်လေးရဲ့ အခန်းဘေးက အခန်းလွတ်မှာ နေရတာ
ဖြစ်သည် ။ ဒီကောင်လေးရဲ့နံမည်က “ စိုင်းဟတ်”… ။
ရောက်တဲ့ညက ညဖက်ကြီး စိုင်းဟတ်သည် သူ့အခန်းထဲ ၀င်လာပြီး သူ့ကုတင်ပေါ်ကို သေနတ်တလက်လာတင်
သည် ။ ဘရက်တာအမျိုးအစား ကိုးမမ ပစ္စတိုတလက် ။ ကျည်ကပ်က အပိုတကပ် ။
“ ခင်ဗျားအတွက် …”
စကား အပို ဘာမှမပြောဘဲ မျက်နှာပုတ်ပုတ်နဲ့ ထွက်သွားသည် ။“ ကိုပေါက် ..”
“ ဟုတ်..ဆရာမ …”
စိုင်းမောင်မောင်တို့ ခေါ်သလိုဘဲ ဆရာမလို့ သူခေါ်လိုက်သည် ။
“ ဒီကို ဘယ်ကနေလာခဲ့တာလဲ…”
“ ကျနော် ကွတ်ခိုင်က လာခဲ့တာပါ…”
“ အော် ..ဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာလဲ …”
“ ဦးစွတ်ထင်းနဲ့ပါ…ဆရာမတို့နဲ့ သိလားမသိဘူး…”
“ ဟင့်အင်း မသိပါဘူး ..ကြားဖူးတယ်…သူ့အကြောင်း…….”
ဒေါ်ရှယ်လီက ကော်ဖီတခွက် သူ့ကိုလှမ်းပေးသည် ။
“ ကိုပေါက် . .”
လည်ဟိုက်တီရှပ်ကြောင့် ဘရာစီယာအထက်က လျံထွက်နေတဲ့ မို့မို့မောက်မောက် ၀င်းဝင်းကြီးတွေကို မကြည့်
မိအောင် မျက်စိလွှဲထားနေရသည် ။
“ ကိုပေါက် …ကော်ဖီကောင်းလားဟင်…”
“ ကိုပေါက်လဲ ဟုတ်ဆရာမ ကလွဲလို့ စကားမပြောတတ်တော့ဘူးလား..ဟင်းဟင်း …”
ကော်ဖီက တကယ်ဘဲကောင်းသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီနဲ့ မီးဖိုခန်းထဲ နှစ်ယောက်ထဲနေရတာ စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားလာသည် ။
“ မိန်းမ ရှိလား …”
“ အော်..ကိုပေါက်မှာ မိန်းမရှိလားလို့ …”
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ မျက်လုံးတွေက သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသလို ဆိုးဆေးနီနီရဲရဲနဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူတွေက မပွင့်တပွင့်နဲ့…။
“ မရှိဘူး..ဆရာမ …”
“ မရှိပါဘူး..ဆရာမ …”
“ ဟုတ်လို့လား …. မလိမ်နဲ့….”
“ တကယ်ပါ..မရှိပါဘူး …”
ဒေါ်ရှယ်လီက မခို့တရို့အမူအရာနဲ့ စိုက်ကြည့်ပြီး မီးဖိုခန်းထဲက တလှမ်းချင်း လျောက်ထွက်သွားသည် ။
သေးကျဉ်တဲ့ခါးအောက်က ဝိုက်ကားကော့ထွက်နေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တုန်ခါလှုပ်သွားနေတာတွေကို ကြည့်
မိနေတော့ သူ့သွေးသားတွေ ဆူဝေကုန်သည် ။
သည်အချိန်မှာ စိုင်းဟတ်ဆိုတဲ့ မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ကောင်လေး သည် မီးဖိုခန်းထဲကို ၀င်လာသည် ။
သူ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ တင်ပါးလှလှကြီးတွေကို တပ်မက်စွာနဲ့ ငေးစိုက် ကြည့်မိနေတာကို စိုင်းဟတ် မြင်သွားသလား မသိဘူး ။
ဒီနေ့မနက် အိမ်ကကားကို ရေဆေး ပြီး အ၀တ်နဲ့ ပြောင်အောင်သုတ်နေခိုက် ဒေါ်ရှယ်လီ အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်
ကနေ ကော်ဖီလာသောက်ဖို့ လှမ်းခေါ်သည် ။
မနက်စောစော အိပ်ရာက ထလာတဲ့အချိန်မို့လား ..။ ဒေါ်ရှယ်လီသည် ဘလောက်စ်အင်္ကျီကို အတွင်းက
အခုအခံမပါဘဲ ဘရာလက်စ် ၀တ်ထားသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ နို့သီးခေါင်းဖုလေးတွေက အင်္ကျီသားမှာဖုပြီး သိ
သိသာသာ တွေ့မြင်နေရသည် ။
စွပ်ကြယ်ဝတ်ထားလို့ တွေ့နေရတဲ့ သူ့လက်မောင်းသားတွေကို ဒေါ်ရှယ်လီ ရုတ်တရက် လာကိုင်ညှစ်လိုက်လို့
သူ တော်တော်ဘဲ စိတ်လှုပ်ရှားသွားသည် ။
“ မင်းဗလတော်တော်တောင့်တာဘဲ..ကိုပေါက် ..”
ဒေါ်ရှယ်လီဆီက ရေမွှေးနံ့သင်းသင်းလေး ရနေသည် ။ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတာကြောင့် သူ့စိတ်တွေ တဟုန်ထိုး
“ ကော်ဖီသောက်လေ..ကြိုက်လား …”
ပြုံးစိစိနဲ့မေးသည် ။ ကော်ဖီကိုမေးတာလား…ဒါမှမဟုတ်..ဖုထင်းနေတဲ့ ရင်သီးလေးတွေကို ပြောတာလား..မသဲကွဲ
“ ခဏကြာရင် ဒို့နဲ့လိုက်ခဲ့..ဟိုဖက်ကမ်း အတွင်းဖက် နေရာကိုသွားစရာရှိတယ် ..”
“ ဟုတ်..ဆရာမ . .”
ဒေါ်ရှယ်လီ အလုပ်ကိစ္စသွားတိုင်း ခါးကြားမှာ သေနတ်ထိုးပြီး သူလိုက်ပါရသည် ။ ဒီတခေါက် စိုင်းဟတ်နဲ့
စိုင်းမောင်မောင်ပါ ပါသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီတို့သည် စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါ ပြိုင်ဖက်တွေ ရှိသလို မနာလိုသူတွေ
ရှိတာမို့ လက်နက်ဆောင်တဲ့ တပည့်လက်သားတွေ အမြဲအတူပါရသည်လို့ စိုင်းမောင်မောင်က သူ့ကို
ဟိုးတုံးထဲက ပြောပြထားခဲ့သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီသည် စိုင်းဟတ်နဲ့ စိုင်းမောင်မောင်တို့ရှေ့မှာ သူ့ကို
သိပ်အရောတ၀င်မနေဘဲ နှစ်ယောက်ချင်းရှိနေချိန်တွေမှာဆို ညုတုတုနဲ့ မြှူသလိုလိုကြူသလိုလို
လုပ်တတ်ကြောင်း သူသတိထားမိလာသည် ။
ဦးကျင်ဟုတ်အကြောင်း စိုင်းမောင်မောင်ကို မသိမသာ စပ်စုကြည့်လိုက်တော့ ဦးကျင်ဟုတ်သည် ဘန်ကောက်ကို
ရောက်နေတာဖြစ်ပြီး အေရးကြီးတဲ့ စီးပွားကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်များနေတဲ့အကြောင်း စိုင်းမောင်မောင်က ပြောပြသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီသည် သည်နယ်မြေတဝိုက်မှာ မြန်မာဖက်က အစိုးရ
၀န်ထမ်းတွေ နဲ့ရော တဖက်ကမ်းက အာဏာပိုင်တွေနဲ့ရော သြဇာညောင်းတာကို တွေ့ရသည် ။ ခင်မင်ရင်းနှီးတာကို တွေ့ရသည် ။
ဒီနေ့တော့ အိမ်မှာနေတဲ့ စိုင်းဟတ်ဆိုတဲ့ကောင်လေး မရှိဘူး ..။
တဖက်ကမ်းက ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ဇာတ်ကားကောင်းလို့ သွားကြည့်သည် ။ သူ ညဖက် ပြန်လာချင်မှ လာမည် လို့လည်း ဒေါ်ရှယ်လီကို ပြောသွားတာ ကြားလိုက်ရသည် ။
ညစာစားတော့ သူနဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီ နှစ်ယောက်ထဲ ။
“ ဒီနေ့ ရှယ်ချက်ထားတယ်….ဒို့နဲ့ ကိုပေါက် စားကြဖို့ …”
ဒေါ်ရှယ်လီသည် ည၀တ်ဂါဝန်ရှည်အနက်ရောင်ကို ၀တ်ထားသည် ။ မီးဖိုခန်းထဲ ဟိုလျောက်ဒီလျောက် လုပ်နေတဲ့အချိန် သူမရဲ့စွင့်ကားကော့ထွက်နေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တဆတ်ဆတ်
ဟင်း …ဒါကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး သူ့ကာမစိတ်တွေက တဒိုင်းဒိုင်း တက်ကြွလို့ လာနေသည် ။
“ ကိုပေါက်..လာလေ..ထမင်းလာထည့်..ဘာငေးနေတာလဲလို့ …”
ဒေါ်ရှယ်လီနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နေနေရတာ သူ့စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်နေသည် ။
“ ကိုပေါက် …”
“ ဗျာ..ဆရာမ …”
“ မင်း ပုံစံတမျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ် …မင်း နေကောင်းရဲ့လား …”
“ ကောင်းပါတယ်..ဆရာမ …”ဒေါ်ရှယ်လီက ဝိုင်သောက်သည် ။ သူက ဘီယာသောက်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ ချက်တဲ့ မုန်ညင်းချဉ်နဲ့ ၀က်သား ..ကြက်သားသုတ် ..သီးစုံပဲကုလားဟင်းက အရသာထူးလှပေမယ့်
တကယ်တမ်း သူစားချင်နေတာက အဲဒါတွေ မဟုတ်ဘူး ။
“ ကိုပေါက်..ဒို့ယောက်ျား ကိုကျင်ဟုတ် ဟာ ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာ ကြားဖူလားဟင် ..”
“ မကြားဖူးဘူး ဆရာမ ..”
“ သူ့အကြောင်းကို မင်း လုံးလုံးမသိဘူးပေါ့..ဟုတ်လားကိုပေါက် ..”
“ ဟုတ်..မသိဘူးဆရာမ …”
“ မသိရင် ဒို့ ပြောပြမယ်..နားထောင် … သူက စီးပွားအရှာကောင်းတယ်..ငွေရမယ်ဆိုရင် ဘနဖူးသိုက်တူးမယ့်လူစား…ရက်စက်တယ်…ပြတ်သားတယ် ..
ဂလဲ့စားခြေတတ်တယ် ..အဆက်အသွယ်ကောင်းတယ် ..အပေါင်းအသင်းတတ်တယ် ..ဒီမြို့ဒီနယ်မှာတော့ သူ့ကို မသိတဲ့လူ မရှိသလောက်ဘဲ ..ဒါပေမယ့် သူက မိန်းမကို ပစ်ထားတယ်…မိန်းမကို ဂရုမစိုက်တဲ့လူ ..ဒို့လေ..
သူ့ကို စိတ်နာတယ် …ဒို့..ဒို့ဘ၀ ဘယ်လောက် အထီးကျန်ဆန်နေသလဲ သူမသိဘူး …ကိုပေါက်ရယ် …”
ဒေါ်ရှယ်လီ ပုလဲခပြီ ..။
မျက်ရည်ပေါက်တွေ က တတောက်တောက် နဲ့ ပါးပြင်ဖွေးဖွေးနုနုပေါ် လိမ့်ဆင်းကျလာကြသည် ။
“ အိုး..မငိုပါနဲ့ ဆရာမရယ် …”
“ မင်းမသိဘူး..ကိုပေါက် …ဒို့ဘယ်လောက် စိတ်ဆင်းရဲသလဲဆိုတာ …ဒို့လေ..ကိုကျင်ဟုတ်ကို ချစ်လို့ ယူခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး …သိလား …သူက…ဒို့ကို အကြွေးနဲ့ သိမ်းယူခဲ့တာ…အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ချစ်တီးကုလားတွေ လုပ်သလိုပေါ့ …ပြီးတော့..လူကိုပါယူသည် ဆိုတာမျိုး …ဒို့အမေနဲ့ အဖေက သူ့အကြွေးတွေကိုမဆပ်နိုင်လို့
ဒေါ်ရှယ်လီသည် ပြောလဲပြော ငိုလဲငိုသည် ။
“ သူ့ကြောင့်ဒို့ ငွေကိုေ၇လိုသုံးလာနိုင်တာတော့ မှန်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ဒို့ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး…ဒို့အခု
ဘဲကြည့်လေ…သူက သွားချင်ရာသွားနေတယ်..ဒို့က ညမပျော်ရတဲ့ညတွေ များနေတယ် …”
“ ဆရာမစိတ်မချမ်းသာတာ မြင်ရတော့ ကျနော်လဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး ..ကျနော် ဆရာမကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်
တယ် ဆရာမ ..”
ဒေါ်ရှယ်လီ သူ့ကို မော့ကြည့်သည် ။
“ မင်း….မင်း…မင်းတကယ်ပြောတာလား..ကိုပေါက် …”
“ ဟုတ်ဆရာမ…ကျနော် ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင် …. ”
“ မင်း တကယ်မသိလို့မေးတာလား ကိုပေါက်..ဒို့ပါးစပ်က ထုတ်ပြောစေချင်လို့လား ဟင်….”
“ ကျနော် တကယ်မသိတာပါ..ဆရာမ စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆို ကျနော် ဘာဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုပ်ပေးမှာ…”
ဒေါ်ရှယ်လီ ပြုံးသွားသည် ။
“ ကိုပေါက်…မင်း ဒို့ကို ဆရာမ..ဆရာမနဲ့ မခေါ်စမ်းနဲ့ကွာ…မမ လို့ ခေါ်….”
“ ဟုတ်….မမ ..”
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အနောက်က အိမ်အပေါ်ထပ်ကို သူလိုက်ပါသွားရသည် ။
လှေခါးကအတက် သူ့အရှေ့က တက်နေတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက သူ့စိတ်တွေကို တဟုန်ထိုး ထ
ဦးကျင်ဟုတ်နဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီတို့ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်သွားသောအခါ ဒေါ်ရှယ်လီက “ ကိုပေါက် ..မင်း အ၀တ်အ
စားတွေ အားလုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ကွာ…” လို့ ပြောရင်း ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်သွားပါသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အမိန့်အတိုင်း သူ အ၀တ်တွေကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီ ရေ
ချိုးခန်းထဲက ပြန်ထွက်အလာကို သူ စောင့်နေသည် ။ မကြာခင် တွေ့ကြုံလာတော့မယ့် အတွေ့အကြုံတွေ ကို
စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ သူ့ပေါင်ကြားက လိင်တန်က မာကျောထောင်ထလာရသည် ။
ရေချိုးခန်းတံခါးပွင့်လာပြီ ။ ဒေါ်ရှယ်လီသည် ပါးလွှာတဲ့ ည၀တ် ၀တ်ရုံလေးနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာသည် ။
ည၀တ် ၀တ်ရုံလေးက ပါးလွန်းတာမို့ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အတွင်းပစ္စည်းတွေကို အတိုင်းသား မြင်တွေ့နေရသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီသည် သူ့ပေါင်ကြားက မတ်ထောင်နေတဲ့ လက်နက်ကြီးကို စူးစိုက်ကာ ကြည့်ရင်း…“ အင်း…ဒို့ထင်
ထားတဲ့အတိုင်းဘဲ..မင်းက ဆိုက်ကောင်းကောင်းနဲ့ လူဘဲ …ဟင်း…လာလေ …မမဆီကို …” လို့ ပြောလိုက်တာ
ကြောင့် သူမဆီကို တိုးကပ်သွားလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီက သူ့လက်တဖက်ကို ဆွဲဆုပ်ကိုင်ပြီး ကုတင်ကြီးပေါ်ကို ခေါ်ဆောင်သွားသည် ။
“ ကိုပေါက် ..မမကို ကြည့်ပါအုံး….မင်းသဘောကျလားဟင် …”
တုန်ရီတဲ့အသံနဲ့ ပြောလိုက်တော့ ဒေါ်ရှယ်လီ သဘောကျစွာနဲ့ ရယ်မောလိုက်ရင်း သူမ ၀တ်ထားတဲ့ ည၀တ်
၀တ်ရုံလေးကို ခါးစည်းကြိုး ဖြေဖြုတ်ပြီး ချွတ်ပစ်လိုက်ပါသည် ။
၀င်းမွတ်တဲ့ ရင်သားစိုင်တစုံက အိပ်ခန်းထဲက မီးတိုင်တွေရဲ့ အလင်းရောင်အောက်မှာ လှလွန်းနေကြသည် ။
ရင်သားဖွေးဖွေးတွေရဲ့ ထိပ်မှာ ပန်းရောင်နို့သီးလေးတွေက ထင်းနေကြသည် ။
“ မင်းကြိုက်လားဟင် ….. ကိုပေါက် …”
“ ဒါဆို မင်းဘာကြောင်ကြည့်နေတာလဲ …စို့လေ…မမနို့သီးခေါင်းတွေကို စို့…စို့ပေးကွာ…”
အငမ်းမရဘဲ နို့သီးခေါင်းလေးတဖက်ကို စို့ပစ်လိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီလဲ “ အင်ဟင်…..အို…..”လို့ အသံလေး
ထွက်ညည်းရင်း မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းကျသွားသည် ။ စို့ကောင်းကောင်းနဲ့ စို့ပေးနေချိန် “ နောက်တဖက်ကို စို့
အုံး..” လို့ ဒေါ်ရှယ်လီက ထပ်ပြောလိုက်ပြန်တာနဲ့ နို့သီးခေါင်းနောက်တဖက်ကို စို့ရပြန်သည် ။
“ ကြိုက်လား ..ကိုပေါက် …”
နို့စို့ပေးနေလို့ ပါးစပ်က မဖြေအားတာနဲ့ သူ့ခေါင်းကို ဆတ်ပြလိုက်သည် ။
“ မင်း ဘာဂျာကော မှုတ်ဘူးလား ..”
ခေါင်းညှိမ့်ကာ အဖြေပေးရင်း နို့သီးခေါင်းမာမာလေးကို လျာနဲ့ သိမ်းသိမ်း ယက်ပေးနေသည် ။
“ အင်း….ဟင်……ယုံတယ်..ယုံတယ်….မင်းနှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေကို မမ တွေ့ကထဲက စတွေ့တွေ့ချင်းထဲက မင်း
ဟာ ဘာဂျာအမှုတ်ကောင်းမယ့်လူဘဲ လို့ သိလိုက်တယ် …”
ဒေါ်ရှယ်လီက ဘာဂျာမှုတ်စေချင်နေပြီမို့ အလှည့်ကျရင် မနွဲ့စတမ်း ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူကြီးတွေကြားထဲ
ကို ခေါင်းထိုးသွင်းပြီး အမွှေးရိပ်ထားလို့ ပြောင်ခုံးဖွေးနေတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ မုန့်ပေါင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို
စပြီး နမ်းရှုံ့လိုက်ရပါသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီလဲ ပေါင်တန်တွေကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကားပေးရင်း “ မမ အဖုတ်ကို မင်းကြိုက်လားဟင်..ကိုပေါက် ..” လို့
ခပ်တိုးတိုး မေးလိုက်ပါသည် ။
“ ကြိုက်တယ်…မမ…မမအဖုတ်က သိပ်လှတာဘဲ …” လို့ သူဖြေကြားရင်း ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို ဖိကာ
ဖိကာနဲ့ ယက်ပေးပါတော့သည် ။
“ အို..အ်ိ..ကိုပေါက်ရယ် ….အမလေး…ဟင်းဟင်း……”ဒေါ်ရှယ်လီလည်း သူ့ခေါင်းကို တအားဆုပ်ကိုင်ပြီး တအားအားနဲ့ အော်ညည်းသည် ။
ဆူဖြိုးတဲ့ ရင်သားလုံးကြီးတွေကို အား၇ပါးရ ဆုပ်နယ် ဖျစ်ညှစ်ရင်း အင်္ဂါစပ်အကွဲကြောင်း နီညိုညိုကြီးကို လျာအပြားလိုက်နဲ့ တပြတ်ပြတ် ယက်ပေး သည် ။
“ အင်ဟင်…အင်..ကိုပေါက်..ကိုပေါက်..သူ..သူ သိပ်လုပ်တတ်ကိုင်တတ်တာဘဲ …ကြိုက်လား..မမအဖုတ်ကို…”
“ ကြိုက်တယ်…မမ….မမအဖုတ်ကို အရမ်းကြိုက်တယ် …”
ပြောလဲပြော ယက်လဲယက် ..တပြတ်ပြတ်အသံတွေ နဲ့ ညည်းငြူသံတွေ ဆူညံနေသည် ။
“ မမ…အနောက်ကနေ ယက်ချင်လို့..မမ ဖင်ကုန်းပေးပါလားဟင် …”
ဒေါ်ရှယ်လီသည် လေးဖက်ထောက် ကုန်းပေးလိုက်သည် ။ ဖြူဖွေးတဲ့ ဖင်တုန်းကြီးတွေ ကြားက အင်္ဂါစပ်အကွဲကြောင်း အမြောင်းနီညိုညိုကြီးက ထင်းနေသည် ။ လျာနဲ့ အောက်ကနေ
အထက် ပင့်ယက်တင်ကာ စယက်ပေးလိုက်သည် ။
ဆက်တိုက် ယက်ပြီ ..။
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အင်္ဂါစပ် အတွင်းထဲကို သူ့လျာကို ထိုးသွင်းမွှေနှောက်ပေးသလို အစိကို စုတ်ပေးတော့ ဒေါ်ရှယ်လီ တအားထိမိသွားပြီး ဆက်မခံနိုင်တော့ဘူး..ကိုပေါက်..ဒို့ကို
လုပ်ပေးပါတော့လို့ ပြောလာသည် ။
ယက်တာကို ရပ်ပြီး ဒေါ်ရှယ်လီ့ပေါင်တန်တွေအကြား နေရာယူလိုက်သောအခါ ဒေါ်ရှယ်လီသည် ခြေထောက်တွေကို ထောင်မြှောက်ခါ ခါးကိုကော့ထားပေးသည် ။ အင်္ဂါစပ်ဖေါင်းဖေါင်း
ကြီးသည် ကော့ထားလို့ ပိုမို့မောက်နေသလိုဘဲ ..။
အရေတွေ စိုပြောင်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်အပေါက်ထဲကို လိင်တန်ကို တေ့ပြီး ဖိသွင်းထည့်လိုက်သည် ။
လိင်တန်ကြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တဖျစ်ဖျစ်နဲ့ စီးပိုင်စွာ ၀င်သွားသည် ။
“ လုပ်မယ်နော် ..”
ရင်သားစိုင်ထွားထွားကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်ကစားရင်း တချက်ချင်းမှန်မှန် ထိုးသွင်းပေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီလဲ တအင်းအင်းနဲ့ ခြေထောက်တွေကိုထောင်ကာ ကော့ကော့ပေးပြီး သူ
ထိုးထည့်သမျှကို တုန့်ပြန်ပေးသည် ။ သူမ အင်္ဂါစပ်ကိုလည်း ဆွဲဆွဲညှစ်ယူပေးနေတော့ သူ့လိင်တန်သည် ပိုပြီးတင်းကြပ်တဲ့ အရသာထူးကို ခံစားနေရသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ့ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး သူ အားနဲ့ ဆောင့်ထည့်ပြီ ..။ အရေတွေက တအား ရွှဲစိုနေတော့ ဆောင့်ချက်တွေက တဖွတ်ဖွတ် အသံတွေ ထွက်လာသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ မျက်နှာလေး မဲ့ပြီး တအင်းအင်းနဲ့ ခံယူနေသည် ။ တော်တော်ကြာကြာ ဆောင့်ပေးနေပြီးမှ ဖင်ပူးတောင်းထောင်ရက် လုပ်ချင်လာမိပြီး ပုံစံပြောင်းရအောင်လို့ ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီက..“ အင်း..အင်း…ဘာလုပ်ပေးရမလဲ…” လို့ မေးသည် ။
သူ့လိင်တန်ကို ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အင်္ဂါစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။
ဖင်ပူးတောင်းထောင်တဲ့ ပုံစံကျအောင် ဒေါ်ရှယ်လီ့ခါးကို ဖိချပေးပြီး တင်ပါးကြီးတွေကို ကော့ထောင်စေပြီး ဒီတင်ပါးဖြူဖြူ လှလှကြီးတွေ အနောက်မှာ သူ နေရာဝင်ယူလိုက်သည် ။
ဖင်စအိုပေါက်နီညိုညိုလေးကို ကြည့်ပြီး ဒီစော်ကြီးကို အနောက်ပေါက် ဖွင့်ဖြစ်အောင်ကို ဖွင့်မည် လို့ သူ့စိတ်ထဲ တွေးလိုက်မိသည် ။
သူ့လိင်တန်က ခြောက်သလိုလို ဖြစ်နေတာကြောင့် လက်ဝါးထဲ တံတွေး ထွေးထည့်လိုက်ပြီး တံတွေးနဲ့ လိင်တန်ထိပ်ပိုင်းကို သုတ်လူးလိမ်းကျံလိုက်ပြီးမှ ပြူးထွက်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး
ထဲကို လိင်တန်ထိပ်ကို ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။
“ အီး…..ရှီး….ကိုပေါက်လီးက တအား လုံးပတ်တုတ်တာဘဲ…”
လိင်တန်ကြီးကို တ၀က်လောက်ဝင်သည်အထိ သွင်းထည့်ပြီးမှ အသွင်းအထုတ် စလုပ်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးသည် အလတ်ကြီး ရှိနေသေးသည် ။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရသာတွေ ပေးစွမ်းနေသေးသည် ။ ခါးကို ကိုင်ဆုပ်ပြီး ခပ်သွက်သွက် သူဆောင့်လေပြီ ။
ဖိုးဖိုးဖတ်ဖတ် အသံတွေ ထွက်လာပြန်သည် ။ သူ့ဥနှစ်လုံးက တဖတ်ဖတ်နဲ့ ရိုက်ခတ်နေသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ တအားအော်သည် ။ ညည်းသည် ။ ရေရေလည်လည် ကိုင်ပြီ..။ ဆွဲပြီ …။ ဒလစပ်ဘဲ ..။ အားအားအား နဲ့ အော်ပေမယ့် ဒေါ်ရှယ်လီ ကျေနပ်နေတာ သိသာသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ ပြီးအောင် နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးမှ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ပါးစပ်ပြဲပြဲကိ ကြည့်ပြီး အစုတ်ခံချင်လာလို့..“ မမ…စုတ်ပေးပါလား…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီက ပြီးအောင် လုပ်ပေးထားလို့ ကျေနပ်နေပြီး..“ တအားကောင်းသွားတာဘဲကွယ်…မမလေ..ဒါမျိုး တခါမှ မရဘူးပါဘူး …မမလင်ကြီးက အဆော်မကောင်းဘူး ကိုပေါက်ရဲ့..”
လို့ ပြောပြီး သူ့လိင်တန်ကို ငုံကာ စုတ်ပေးပါတော့သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေကြားထဲ သူ့လိင်တန်ညိုညိုကြီး ရောက်နေပြီ ..။
တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်ပေးလိုက် လျာနဲ့ ကလိပေးလိုက်နဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီသည် သူမဟာ အစုတ်ကောင်းတဲ့ မိန်းမတယောက် ဆိုတာ ပြသနေပြီ …။ အစုတ်ကျွမ်းတဲ့ ပုလွေမမ ဘဲ …။
လိင်တန်အရင်းအထိ ငုံငုံ စုတ်ပေးနေသည် ။
လက်တဖက်ကလဲ သူ့ဥတွေကို ချေနယ်ပေးနေသည် ။ ဖွဖွလေး ချေနယ်တာမျိုး ..။
စိတ်ထလာပြီး စုတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူမ ပါးစပ်ထဲ ကော့ကော့ထိုးထည့်မိသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီက လျာနဲ့ လိင်တန်ထိပ်ခေါင်းကို ထိုးလှိမ့်လှည့်ပတ်ပေးနေလို့ အရသာတွေ အရမ်းကို
ထူးကဲလာရပြီး ပြီးချင်သလိုလို ဖြစ်လာလို့..“ မမ..ပြီးလိုက်ရမလား…” လို့ မေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီက ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်လို့ စိတ်ကို လျော့ပြီး သုတ်ရေတွေ တအား လွှတ်ပန်းထည့်
ကာ ကောင်းခြင်းလမ်းဆုံးကို တက်လှမ်းလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီလည်း သုတ်ရေတွေကို ထွေးမထုတ်ဘဲ တကွပ်ကွပ်နဲ့ မြိုချလိုက်တာကို တွေ့ရသည် ။
“ ကောင်းလား..ကိုပေါက် …”
“ တအား အရမ်းပေါ့..မမ…မမက တကယ်တော်တာဘဲ…”
“ ဟွန်း…တော်ပါ..သူကရော..တကယ် အမှုတ်ကောင်းတဲ့ ဘာဂျာသမားလေး ….”
ဒေါ်ရှယ်လီနဲ့ အိပ်ရာထဲ ခဏ အနားယူလိုက်ကြပြီး ခဏအကြာ ဝိုင်..ဘီယာနဲ့ ဒိန်ခဲ စားသောက်ကြသည် ။ ပွတ်သပ်ကျည်ဆယ်ကြရင်း စိတ်တွေ ပြန်လည်ထကြွလာကြပြန်တော့
နောက်တချီတမောင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကာမပွဲကလေးတပွဲ ထပ် နွှဲလိုက်ကြပြန်သည် ။ဒေါ်ရှယ်လီသည် တဏှာရာဂအား အရမ်းကြီးမားတဲ့ မိန်းမတယောက်ဆိုတာ သူ ဒီညမျာ ကောင်းကောင်းကြီး သိ
လိုက်ရသည် ။ တချီပြီးတချီ ပွဲတွေကြမ်းကြတာ မိုးစင်စင်လင်းရော ..။
မနက်ပိုင်း စိုင်းဟတ် ပြန်လာတဲ့အချိန် သူ သူ့အခန်းမှာ အိပ်ပျော်နေတာကို စိုင်းဟတ်တွေ့ပြီး နေ့လည်လောက်
သူနိုးထလာတဲ့အချိန်..“ ဘယ်လိုလဲ..ခင်ဗျား အိပ်လှချည်လား..ညက မအိပ်ဘူးလား…” လို့ သူ့ကို စိုင်းဟတ်က
မေးသည် ။ “ အေးကွာ..စာဖတ်တာများသွားတယ်…” လို့သူဖြေလိုက်သည် ။
ညနေပိုင်းမှာ ဒေါ်ရှယ်လီက တဖက်ကမ်းကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားမယ်..ကိုပေါက်လိုက်ခဲ့..လို့ ခေါ်သည် ။ စိုင်းဟတ်ကို မခေါ်ဘူး ။ စိုင်းဟတ်က “ ကျနော်လိုက်ခဲ့ရမလား..အန်တီ ”
လို့မေးသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီက “ စိုင်းဟတ် မလိုက်တဲ့တော့..ဒီနားတင် သွားမှာ…အိမ်ကို လီထယ်တို့ ကြွေးလာပေးချင်ပေးမယ် ..အိမ်မှာ လူမရှိ
ရင် ကြွေးမပေးဘဲ ပြန်သွားနေအုံးမယ် ..မင်း အိမ်မှာစောင့်နေလိုက်..” လို့ ပြောသံ ကြားလိုက်ရသည် ။
ထုံးစံအတိုင်း သူ သေနတ် နောက်ကျောဘောင်းဘီကြားမှာ ထိုးညှပ်ပြီး ဒေါ်ရှယ်လီ အနောက်ကို လိုက်သွားရသည် ။ တဖက်ကမ်း က အိမ်တအိမ်ကို ဒေါ်ရှယ်လီ အလုပ်ကိစ္စ သွားတာ
အဲဒီအိမ် မရောက်ခင် သူ့ကို “ သေနတ် ပါခဲ့လား..ကိုပေါက်..” လို့ မေးသည် ။ သူက ခေါင်းညှိမ့်ပြသည် ။
“ လိုတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး…လိုလိုမယ်မယ်ပေါ့…သတိတော့ထား…”
“ ဟုတ် ဆရာမ …”
ဒေါ်ရှယ်လီက တဟင်းဟင်းနဲ့ ရယ်သည် ။
“ လာပြန်ပြီလား..ဒီဆရာမ …”
အလုပ်ကိစ္စ စကားပြောတာက ဆယ်မိနစ်လောက်ဘဲ ကြာတာပါ ..။ ဒေါ်ရှယ်လီ က “ ကိုပေါက်..ဟိုးရှေ့က ဟိုတယ်မှာ အခန်းသွားယူလိုက်..ပြီးရင် မမကို အခန်းနံပါတ် ဖုန်းနဲ့
ဆက်ပြော..မမ လာခဲ့မယ် …မမ အနေနဲ့မငှားချင်ဘူး..သူတို့ အားလုံးက မမနဲ့ မမလင်ကို သိနေကြလို့….” လို့ ပြောလေသည် ။
တညလုံး ကဲပြီးတာတောင် မကျေနပ်နိုင်သေးတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီသည် ဘယ်လောက်တောင် ကာမကိစ္စ ငတ်ပြတ်ဆာလောင်နေသလဲ မသိဘူး ။
သူ့အနေနဲ့ကတော့ ဒေါ်ရှယ်လီ ကျေနပ်သည်အထိ ဖြုတ်ပေးမှာပါဘဲ ။
ဟိုတယ်အခန်းငှားပြီး ဒေါ်ရှယ်လီကို ဖုန်းဆက်လိုက်သည် ။
“ ရပြီ…မမ…အခန်းနံပါတ် ၇၀၀ …”
“ မမ လာခဲ့မယ်..အေးဆေး နားနေလိုက်..စားစရာလဲ ၀ယ်ခဲ့မယ် …”
ဒေါ်ရှယ်လီ ရောက်လာတဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ သူရေချိုးလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ မကြာခင်ရောက်လာရင်ပွဲကြမ်းကြရမည်မို့ ဆပ်ပြာနဲ့သူ့တကိုယ်လုံးကို ကျကျနန
တိုက်ချွတ်ဆေးကြောသည် ။ မနေ့ညက အကြိမ်ကြိမ် ကာမပွဲကြမ်းတွေနွှဲခဲ့ကြတာတွေကို ပြန်လည်စဉ်းစား မြင်ယောင်တော့ သူ့တန်ဆာ မာကျောကြီးထွား လာသည် ။
တကိုယ်လုံးကို ရေပူနဲ့ အကြာကြီး ချိုးလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီက သူ့တန်ဆာကို အပီအပြင်စုတ်ပေးတော့မှာမို့ တန်ဆာကို ဆပ်ပြာနဲ့ ကျကျနန ပွတ်တိုက်ဆေးကြောတော့
တန်ဆာကြီးသည် ပိုလို့ပိုလို့ ကြီးထွားမာကျောကာ မတ်မတ်ကြီးထောင်လာတော့သည် ။
ဒီအချိန်မှာ အပြင်က ခြေသံကြားရသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ လာတာဖြစ်မည် ။
မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ခါးမှာ ပတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဖွင့်ကာ အပြင်ကို လှမ်းထွက်လိုက်သည် ။ သူ့အထင်
လွဲမှားသွားတာကို သိလိုက်ရသည် ။
ဟိုတယ်ခန်းထဲကို ၀င်ရောက်လာတာ ဒေါ်ရှယ်လီ မဟုတ်ဘူး ။
ပိန်ပိန်ပါးပါး အသားဖြူဖြူ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ လူတယောက် ။ စပို့ရှပ် အနက်..ဂျင်းဘောင်းဘီအနက် ၀တ်ထားသည် ။ ဒီလူ့လက်ထဲမှာ သေနတ်မဲမဲကြီးတလက် ။
သာမန်သေနတ်တလက်ရဲ့ပြောင်းထက် ပိုတုတ်ပိုရှည်နေသည် ။ အသံထိန်းပြောင်းပိုတပ်ထားတာ ..။
“ ခုခံဖို့ မကြိုးစားနဲ့…အသေပစ်သတ်မှာ….”
အသံကတိုးပေမယ့် မာကျောပြတ်သားသည် ။ ပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်လုပ်မယ့်ပုံ ..။ သူသေနတ်ကိုင်ထားပုံက
သေနတ်နဲ့ အကျွမ်းဝင် လုပ်ကိုင်စားနေတဲ့ပုံပေါက်သည် ။
“ မင်း ဘယ်သူလဲ…”
ဒီလူက သူ့ကို သေနတ်နဲ့ တည့်တည့်မတ်မတ် ချိန်ရွယ်ထားရင်း မေးသည် ။
“ ငါ့နံမည် ကိုပေါက် …”
“ မင်း မလ်ိမ်နဲ့..မင်း ဘယ်သူလဲ..ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ…”
“ ငါပြောပြီးပြီလေ ..ငါ့နံမည် ကိုပေါက်..ငါက ကွတ်ခိုင်က လာတာ ..ဦးစွတ်ထင်းရဲ့လူ ..”
“ ဟားဟားဟား…..ရယ်ရတယ်ကိုယ့်လူ …မင်း ညာနေတယ်…မင်း အစိုးရဖက်ကလူလား…ဒါမှမဟုတ် တိုင်းရင်း
သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုခုကလား ..”
“ ငါမညာဘူး ..”
ဒီလူရဲ့ရယ်မောနေတာ ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းသွားသည် ။
“ သေပေတော့ …. ”
သေနတ်မောင်းခလုပ်ကိုကွေးညှစ်တော့မယ့်အချိန် ဟိုတယ်အခန်းတံခါး ရုတ်တရက် ပွင့်သွားသည် ။သေနတ်သ
မား အခန်းဝကို လှည့်အကြည့် သူ ခုန်ဝင်ပူးကပ်ပြီး သေနတ်သမားရဲ့ သေနတ်ကိုင်လက်ကို သူ့လက်ဖျန်နဲ့
ရိုက်ထည့်လိုက်သည် ။ သေနတ် သည် သေနတ်သမား လက်ထဲက လွတ်အသွား တချိန်ထဲမှာဘဲ သူ့ညာလက်သီးက သေနတ်သမားရဲ့ မျက်ခွက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးနှက်လိုက်သည်
။ သေနတ်သမား ကြမ်းပြင်ကို ပက်လက်အကျ သူ့ညာခြေက ဒင်းရဲ့ နားထင်ကို ပြင်းထန်စွာ ကန်ထည့်လိုက်သည် ။
နာကျင်စွာညည်းငြူသံ နဲ့အတူ သေနတ်သမား သူ့မျက်နှာကိုသူလက်နဲ့အုပ်ကိုင်လိုက်ချိန် သူ့ဘယ်ခြေက ဒင်း
မျက်နှာကို ထပ်ကန်ထည့်လိုက်ပြန်သည် ။
အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ဝင်လာတဲ့သူက ဒေါ်ရှယ်လီ ။
ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့ သေနတ်ကို သူကောက်ယူလိုက်သည် ။ သေနတ်သမားသည် ဒူးထောက်ရက်နဲ့ ညည်း
ငြူနေသည် ။ သူ သေနတ်သမားရဲ့ နဖူးကို ချိန်ရွယ်ခါ မောင်းဖြုတ်ဖို့လုပ်တော့ ဒေါ်ရှယ်လီက တားသည် ။
“ မလုပ်နဲ့ကိုပေါက် ..သူက မမတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်အဖွဲ့တဖွဲ့ဖွဲ့ကနေမယ်…ဒင်းကို စစ်မေးရမယ်….”
သေနတ်မဲ့သွားတဲ့ သေနတ်သမားသည် သူ့အလှည့်ကျတော့ ကြောက်တတ်သား ။
ဒေါ်ရှယ်လီက ဖုန်းထုတ်ပြီး သူ့လူတွေကို ခေါ်လိုက်သည် ။ဒေါ်ရှယ်လီလဲ သူနဲ့ဟိုတယ်ခန်းမှာ ပွဲကြီးပွဲကောင်း ကြုံ ပြီလို့ မှန်းထားပေမယ့် သေနတ်သမား ၀င်ရှုပ်လိုက်တာနဲ့ အလုပ်မဖြစ်တော့လို့ စိတ်ပျက်သွားပုံရသည် ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲ စိုင်းဟတ်က ဒီနေ့ည ဘယ်မှမထွက်တော့ဘဲ ဒီဗီဒီထိုင်ကြည့်နေတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး ။
စိုင်းဟတ် အိမ်သာတက်နေတုံး ဒေါ်ရှယ်လီက သူ့ကို ကပ်ပြီး “ မနက်ဖန်ကျရင် တနေရာရာမှာ တွေ့ကြရအောင်ကွာ…ကိုပေါက်ကို မမ အရမ်းတွေ့ချင်နေတယ်…” လို့ ရမက်ပြင်းတဲ့အသံ
နဲ့ ပြောသည် ။
သို့ပေမယ့် ဒေါ်ရှယ်လီ ဆုတောင်းမပြည့်ရှာဘူး ။
နောက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ လင်းရိုဘာကားကြီးတစီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းလာပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ထိုးဆိုက်လာသည် ။
ဦးကျင်ဟုတ်က ဒေါ်ရှယ်လီ နဲ့အတူ သူတို့ တပည့်တွေကို တဖက်ကမ်းက တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ကြီးမှာ ညစာကျွေးသည် ။ ဦးကျင်ဟုတ်က လက်မြန်သွေးအေးစွာနဲ့ ဟန်လုလုကို ရှင်းပစ်
လိုက်တဲ့ သူ့ကို သဘောကျတယ်လို့ ထပ်ပြီး ချီးမွမ်းလိုက်လို့ အားလုံးက လက်ခုပ်တွေ တဖြောင်းဖြောင်း တီးလိုက်ကြသည် ။
“ သောက်ကြ..စားကြ..ငါ့တပည့်တွေ ..မင်းတို့ကို ဂုဏ်ပြုတာ ….”
ဦးကျင်ဟုတ်လဲ အရက်ကို တစွတ်စွတ်သောက်သည် ။ ယိမ်းထိုးနေအောင်ကို မူးသွားသည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒေါ်ရှယ်လီက မင်းတို့ ဘောစိကို တွဲကြပါအုံး လို့ အကူတောင်းလို့
သူဦးကျင်ဟုတ်ကို ဖေးမပြီးအိမ်ကို ပြန်ခေါ်သွားရသည် ။ ကျန်တဲ့တပည့်တွေကတော့ တော်တော့်ကို မူးနေကြတော့ မလိုက်လာကြတော့ဘူး ..။ သူက အိပ်ခန်းထဲအထိ လိုက်ပို့ပေးရသည် ။ ပက်လက်ကြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ လင်ကြီးကို ဒေါ်ရှယ်လီ စိတ်ပျက်တဲ့ ပုံနဲ့ ကြည့်လိုက်သည် ။ ဦးကျင်ဟုတ် ပြန်ရောက်လာလို့ စိုင်းဟတ် လစ်ပြီ ..။ သူက ဘော်ဒါတွေနဲ့ လစ်ချင်နေတာကြာပြီ ။ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ..။
ဒေါ်ရှယ်လီက “ ခဏကြာ မမ ဆင်းခဲ့မယ် …” လို့ သူ့ကို တိုးတိုးပြောလိုက်သည် ။
ကြည့်ရတာ ဒေါ်ရှယ်လီ တအားထန်ပြီး အရမ်းလိုချင်နေပြီ ။
သူ့လင်ကြီး ရှိနေတဲ့အချိန်တောင် ကုန်းမယ့်သဘော .. ။ ခဏကြာတော့ ဒေါ်ရှယ်လီ အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာသည် ။ သူ့အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်လာသည် ။
“ မမလေ…ကိုပေါက်ကို မတွေ့ဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူး ….”
ဒေါ်ရှယ်လီလည်း သူ့ဘောင်းဘီက ခါးပတ်ကို ဖြုတ် ..ဇစ်ကိုဆွဲချ ..ဘောင်းဘီကို အောက်ကို ချွတ်ချပြီး မာကျောစပြုနေတဲ့ သူ့လိင်တန်ကို သူမလက်တွေနဲ့ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်သည် ။
“ ကြိုက်တယ်ကွာ..မမလေ..ကိုပေါက်ဟာကြီးကို ရေရေလည်လည် ကြိုက်တယ် …”
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးမှုကြောင့် သူ့ပစ္စည်းကြီးသည် တမဟုတ်ခြင်း ကြီးထွားသန်မာ လာလေပြီ ။
“ အားရစရာ ကောင်းလိုက်တာ ကိုပေါက်ရယ် …”
ထိပ်ဖူးအထစ်ကြီးကို နှုတ်ခမ်းထူထူတွေနဲ့ ပြွတ်ကနဲ စုတ်လိုက်ပြီး ဥနှစ်လုံးကို လက်တဖက်က ဆုပ်နယ်နေသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ လိင်တန်အရင်းထိ ဖမ်းဆွဲငုံလိုက်ပြီး အငမ်းမရ စုတ်တော့တာဘဲ ..။
ပြွတ်ပြွတ်ပြတ်ပြတ် အသံတွေ ထွက်လာသည် ။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညအချိန်မို့ ဒေါ်ရှယ်လီ စုတ်တဲ့အသံတွေက ကျယ်လောင်နေတယ်လို့ ထင်ရသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ့လျာက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့
ထိပ်ဖူးကြားထဲကို ထိုးဆွပွတ်လှိမ့်နေသည် ။ လောဘတကြီး ကို စုတ်နေသည် ။ ယက်နေသည် ။ လင်ကြီး အိမ်မှာ ရှိနေတဲ့အချိန် လုပ်ရတာမို့ ဒေါ်ရှယ်လီသည် အချိန်ဆွဲမှုတ်မနေတော့ဘဲ
သူ့ကို မှုတ်တာ ရပ်လိုက်ပြီး “ မမ ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ..ဖင်ကုန်းပေးရမလား…” လို့ မေးလဲမေး..ထမိန်ကို ခါးအထိ လှန်တင်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်လက်ထောက်ခါ ကုန်းပေးသည် ။
သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီ့ခြေထောက်တွေကို ဘေးတဖက်တချက်ကို ချဲကားလိုက်ပြီး ခါးကို ဖိနှိမ့်ကာ တင်ပါးကြီးတွေကို ကော့ထောင်စေပြီး ဖူးခုံးနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်အိအိကြီးထဲကို
သူ့ထိပ်ဖူးနီနီကြီးကို ဖိသွင်းထည်ှုလေသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲကို တင်းစည်းစည်းနဲ့ ၀င်ရောက်သွားတဲ့ သူ့လိင်တန်သည် စိုအိအိ အင်္ဂါစပ်အတွင်းသားနုနုတွေနဲ့
ထိတွေ့ပွတ်တိုက်တဲ့ အ၇သာထူးတေါကို ခံစားလိုက်ရသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ဖင်စအိုပေါက်ညိုညိုလေးကို သူ လက်ချောင်းတွေနဲ့ စတင်ပြီး ထိုးဆွ ကလိသလို တ၀က်ခန့်
အင်္ဂါစပ်အတွင်းရောက်နေတဲ့ သူ့တန်ဆာကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အဖျားနားရောက်ခါနီးမှာ ပြန်ထိုးသွင်းသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အင်္ဂါစပ်သည် တင်းကြပ်စီးပိုင်နေသည် ။ ကောင်းလွန်းတဲ့အရသာ
ကြောင့် သူ ဖိဖိသွင်းထည့်နေသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ညည်းထွက်လာသည် ။
“ အီး….ဟင်း..တအားကောင်းတယ် …”
“ လုပ်မယ်နော် …”
ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်လုပ်ရာက အရှိန်အဟုန်တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်ပေးလိုက်သည် ။
ဖတ်ဖတ် ပတ်ပတ် အသံတွေ ညံသွားသည် ။ “ အင်း…အင်း….အင်း..အား…အား…..အား……”
ဒေါ်ရှယ်လီ တင်ပါးကြီးတွေကို နောက်ပြန်ကော့ကော့ပေးနေသည် ။ တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းရင်း အရသာခံနေသည် ။ သူလည်း ခပ်မြန်မြန်ဘဲ အဆုံးသတ်လိုက်သည် .။ တင်ပါးဖွေးဖွေး
ကြီးတွေ အပေါ်ကို သုတ်ရေတွေ ထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီး ကောင်းခြင်းကို တက်လှမ်းသွားရသည် ။
“ မမကော ကောင်းလားဟင်..ပြီးလား…”
“ အင်း..ပြီးတယ်..၂ခါတောင်….ကောင်းလဲ တအားကောင်းတယ်ကွာ….”
ဒေါ်ရှယ်လီ သိပ်ကြာကြာမနေဘဲ အိမ်အပေါ်ထပ် ပြန်တက်သွားပါသည် ။
“ အင်း…လုပ်ရတာ အန္တရာယ်များလိုက်တာ..မိသွားရင် မလွယ်ဘူး ….” ဒေါ်ရှယ်လီ ကို ညာလိုက်သည် ။ စိုင်းဟတ်ရော ဦးကျင်ဟုတ်ရော အိမ်မှာ မရှိခိုက် ဒေါ်ရှယ်လီ သည် သူ့အခန်းကို ရောက်လာသည် ။
“ ကိုပေါက် ..မမ..မမလေ..မင်းကို အရမ်း သတိရနေတာ …ကိုပေါက်ရော မမကို သတိမရဘူးလားဟင် …”
“ မမ…ဆရာ အချိန်မရွေး ပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်..မမ …မကောင်းဘူးထင်တယ် ….”
“ ကိုပေါက် …ဟင့်အင်းကွာ…မမ….မမ…တအားလိုချင်နေတယ်….ချစ်ပေး..ချစ်ပေး …..”
တအားဖက်ရင်း သူ့မျက်နှာအနှံ့လိုက်နမ်းနေတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီကြောင့် သူ ခက်နေသည် ။ ဦးကျင်ဟုတ် ပြန်ရောက်လာလို့ သိသွားရင် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခများကုန်မည် ။
“ မမ ..မကောင်းဘူးထင်တယ် ….”
“ရပါတယ်ကွာ..သူ ပြန်မလာသေးပါဘူး ..သူက သိတဲ့အတိုင်းဘဲ လေရှည်တယ်…ကြာအုံးမှာပါ ….”
ဒေါ်ရှယ်လီ့လက်တဖက်က သူ့ပေါင်ကြားကို ရောက်လာသည် ။ ရေချိုးမလို့ ပြင်နေခိုက်မို့ သူပုဆိုးကို တထပ်ထဲ ၀တ်ထားချိန် ဖြစ်နေသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ့လက်ချောင်းတွေက ပုဆိုးပေါ်က
နေ သူ့လိင်တန်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့ သူလဲ စိတ်တွေ ထိန်းချုပ်လို့ မရတော့ဘူး ။ သူမရင်သားစိုင် ထွားထွားတွေကို လှမ်းဆုပ်ကိုင်မိလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီက အချိန်ဆွဲမနေ ။
သူ့ပုဆိုးစကို ဆွဲဖြုတ်သည် ။ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ ထောင်ထလာတဲ့ ငေါငေကြီး ဖြစ်နေတဲ့ သူ့လိင်တန်ကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်သည် ။ ဖျတ်ကနဲ သူ့ရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး လိင်တန်ကို ဖမ်း
ငုံလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ လျာလေးနဲ့ ကလိပေးတာကြောင့် တောင်ခါစ သူ့လိင်တန်သည် တဖြေးဖြေး ကြီးသထက်ကြီး..မာသထက်မာလာသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ စုတ်ပြီ ။ အငမ်းမရကို
စုတ်တာ …။ ပြွတ်ပြတ်ပြွတ်ပြတ် အသံဗလံတွေ ထွက်နေသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ့ပါးစပ်ထဲကို ကော့ကော့ညှောင့်မိနေသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ ကြာကြာ မစုတ်ဘူး ..။ သူ့လိင်တန်ကို ပါးစပ်ထဲက ထုတ်ပြီး သူမထမိန်ကို ခါးအထိမတင်လှန်ထည့်လိုက်ပြီး ကုတင်စောင်းမှာ ကုန်းပေးသည် ။
သူ့လင်ကြီး ပြန်မလာခင် အပြီးဆော်ကြရမှာမို့ ဖင်ကုန်းပေးနေတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီ့ဖင်အနောက်မှာ နေရာယူလိုက်ပြီး ပထမဆုံး သူ့လိင်တန်ကို သူ့တံတွေးတွေနဲ့ သုတ်လိမ်းလိုက်သည် ဖေါင်းပြူးထွက်နေတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီ့အဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့လိင်တန် ထိုးနှစ်ပေးလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ ပါးစပ်လေးဟပြီး အော်ညည်းလိုက်သည် ။
သူ့လိင်တန်ကြီး စီးစီးပိုင်ပိုင်ကြီး အတွင်သားနံရံတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး အင်္ဂါစပ်အထဲကို တဆုံးဝင်သွားသည် ။
“ အီး….အီဆိမ့်သွားတာဘဲကွာ…လိုးမောင်လေး …မမကို တအားလိုးစမ်းကွာ….”
ဒေါ်ရှယ်လီ ခါးလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူဆောင့်ထည့်ပြီ ။ တဖပ်ဖပ်အသံတွေ မြည်လာသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ အူးအဲအားနဲ့ အော်ရင်း သူမဖင်ကြီးတွေကို လှုပ်ခါပေးရင်း သူဆောင့်တာတွေကို
“ အား…အား…အား…ကောင်းလိုက်တာ..လိုး…လိုး …..”
အမြန်ဆွဲပစ်လိုက်သည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ့ဖင်တုံးဖြူဖြူကြီးတွေ အပေါ်ကို သူ့သုတ်ရေတွေ ထုတ်ပန်းပစ်လိုက်ရင်း သူပြီးသွားရသည် ။
အင်္ဂါစပ်အိအိကြီးထဲ သူ့အတန်ကို တဆုံး ထိုးသွင်းထားရင်း ကောင်းသွားတဲ့ အရသာကို ခံစားနေချိန် “ ကိုပေါက် ..” လို့ ဒေါ်ရှယ်လီက ခေါ်လိုက်သည် ။
“ အင်…မမ ….”
“ မင်းလိုးနေတုံး မမဖင်ပေါက်ကို လက်နဲ့ ကလိနေတာ ဘာလို့လဲ..မမဖင်ကို လိုးချင်လို့လား …”
သူဘာမှ ပြန်မဖြေဖြစ်ဘူး ။
“ ကိုပေါက်..ပြောလေ…မင်း မမဖင်ကို လိုးချင်နေတာလား ….”
“ လူဆိုး..ဒီလောက်စောက်ပတ်ပေးတာတောင် မကျေနပ်သေးဘူး..ဖင်ကိုလာရန်ရှာနေတယ် …”
ဒေါ်ရှယ်လီလဲ ထမိန်လေးမထားရင်း ဆေးကြောသုတ်သင်ဖို့ ရေချိုးခန်းထဲကို ပြေးဝင်သွားသည် ။
သူလဲ သူ့လိင်တန်ကို ဆေးကြောဖို့ ဒေါ်ရှယ်လီ့အနောက်ကနေ ရေချိုးခန်းထဲကို လိုက်ဝင်သွားလိုက်သည် ။
“ ကိုပေါက် …ကိုကျင်ဟုတ်ရဲ့ ညီမ မိသားစု ဒီကို လာလည်မယ့်အကြောင်း သိပြီးပြီလား …”
“ အင်း..သိပြီးပြီ..မမ …”
ဒေါ်ရှယ်လီသည် အိမ်သာခွက်မှာ ထိုင်ရင်း သေးပေါက်နေသည် ။ သူ့လိင်တန်ကို သူဆေးကြောနေတာကို စိုက်ကြည့်ပြီး…“ ကိုပေါက်က လီးတော်တော်ကြီးတယ်..တကယ့်ဟာကြီး
ဘဲ…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
“ မမကြိုက်လား…” လို့ သူမေးတော့..“ အင်း…ကြိုက်တယ် ..” လို့ သူမဖြေသည် ။
ဟော…ကားသံကြားတယ် ….ကိုကျင်ဟုတ် ပြန်ရောက်ပြီလားမသိဘူး …။
ဒေါ်ရှယ်လီ ရေချိုးခန်းထဲက ပြေးထွက်သွားသည် ။ညနေပိုင်းမှာ ဒေါ်ရှယ်လီက သူ ဒေါ်မိုးပုလဲနဲ့ ရွဲတို့အတွက် ပစ္စည်းမှာထားတာ ဟိုဖက်ခြမ်းမြို့မှာ သွားယူလိုက်အုံးမယ် လို့ ပြောပြီး ဦးကျင်ဟုတ်က ဒေါ်ရှယ်လီ တယောက်ထဲ သွားမှာကို
စိတ်မချဘဲ သူ့ကို ဒေါ်ရှယ်လီနဲ့ အဖေါ်လိုက်သွားဖို့ ပြောသည် ။
သူလိုက်သွားရတော့ ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဘဲ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့လုပ်ကွက်တကွက် ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားရသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီသည် သူ့ကို လူမနေတဲ့ အိမ်တလုံးဆီကို ခေါ်သွားတာ ဖြစ်
နေသည် ။ အိမ်ထဲကို ရောက်တာနဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ပေါင်ကြားဂွဆုံနေရကို ကိုင်တော့တာဘဲ..။
“ ကိုပေါက်..မမ သိပ်ထန်နေတယ်ကွယ်….မမကို ချစ်ပေးစမ်းပါ ….” လို့ ဖီလင်သံနဲ့ ပြောလာတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီကို သူ စိတ်မရှိပေမယ့် ဆန္ဒဖြည့်ဆည်းပေးရအုံးမည် ။
သူ့ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ဖို့အတွက် လုပ်စရာတွေကို ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပါ လို့ သူ့ကို အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ အကြီးအကဲက မှာကြားခဲ့သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီသည် တုန်နေတဲ့ လက်တွေနဲ့ သူ့ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးကို ဖြုတ်နေသည် ။ ပြီးတော့ ဇစ်ကို ဆွဲချသည် ။
သူ့ဖွားဖက်တော်ကလည်း ဒေါ်ရှယ်လီ ကိုင်ဆုပ်လိုက်ကထဲက ဒိုင်းကနဲ ထောင်ထ မာကျောနေခဲ့သည် ။
“ ကိုပေါက်ဟာကြီးကို မမ မြင်တာနဲ့တောင် အရည်တွေက ပေါင်ကြားမှာ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေပြီကွာ….မမလေ..ဒါကြီးကို အသဲခိုက်အောင်
သူ့ဖွားဖက်တော် ကို ဒေါ်ရှယ်လီ ပွတ်သပ်ကြည့်နေသည် ။
သူ့ဖွားဖက်တော်ထိပ်ခေါင်းက အပေါက်လေးကလည်း အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်နေသည် ။
“ မမ စုတ်မယ်နော် …”
ဒေါ်ရှယ်လီက သူ့ကို အိမ်ကလေးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကုတင်ပေါ် ထိုင်စေပြီး သူ့အရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်သည် ။ လိင်တန် တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီးကို စစချင်း လျာလေးနဲ့ ယက်ပေးသည် ။
“ အား…ဟား …..”ဒေါ်ရှယ်လီ လည်း ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းက အ၀တ်တွေ ကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်လို့ ရင်သားစိုင်ထွားထွားကြီး နှစ်ခိုင် ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ကိုင်ပါတော့ နယ်ဖတ်ပါတော့လို့
“ စုတ်..စုတ်…မမ …”
ဒေါ်ရှယ်လီ ပြွတ်ပြတ်တွေ မြည်အောင် အားရပါးရ စုတ်ပေးနေသည် ။ သူ့ဥနှစ်လုံးက လှုပ်တုပ်တုပ် ဖြစ်နေတာကို ဒေါ်ရှယ်လီ ကြည့်လို့ မျက်စိနောက်လာပုံရသည် ။ သူမလက်တဖက်နဲ့
ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပြီး လိင်တန်တဆုံး ငုံကာ ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ စုတ်ပေးသည် ။ နှုတ်ခမ်းထူထူနှစ်ချပ်ကြားထဲကို သူ့လိင်တန်နီညိုညိုကြီး ၀င်ထွက်နေတာကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ဒေါ်ရှယ်လီ့
ရင်ထွားထွားနှစ်မွှာကိုလှမ်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ နို့သီးခေါင်းနီညိုညိုလေးတွေက တင်းမာပြီး စူထောင်ထွက်နေကြသည် ။ ဒီနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ချေပေးတော့
စုတ်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းကာ သွားပြီး ကိုင်ထားတဲ့ သူ့ဥနှစ်လုံးကို အားကျမခံ ပြန်လည်ကာ ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်လေသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ လျာက သူ့ထိပ်ဖူးအထစ်ကြားထဲကို ဝေ့ဝိုက်ပတ်လှည့်ပေးနေလို့ အရသာထူးကို ခံစားရင်း ဒေါ်ရှယ်လီ့ပါးစပ်ထဲကို လိင်တန်နဲ့ ထိုးထိုးထည့်မိသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီကလဲ
၀င်လာတဲ့ လိင်တန်ကို အားရပါးရ စုတ်ပေးနေသည် ။
ဒီအတိုင်းဆိုရင် ဒေါ်ရှယ်လီ့ပါးစပ်ထဲမှာပြီးသွားနိုင်သည် ။ ပြီးသွားရင် ဒေါ်ရှယ်လီ လိုလားနေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ချက်ချင်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားမည် ။
“ တော်ပြီ…မမ…..တော်ပြီ..ကျနော်တို့ လုပ်ကြရအောင် …”
ဒေါ်ရှယ်လီလဲ အမှန်တကယ်မှာ ကိုပေါက်ရဲ့ လုပ်ပေးတာကို ခံချင်လှပြီ ။ လင်ရော ဧည့်သည်တွေရော ရှိနေပြီး အလုပ်များနေတာတောင် ခံချင်စိတ်တွေ ထိန်းမရဘဲ တအားယားနေတာ
ကြောင့် အလုပ်ကိစ္စ ဘန်းပြပြီး ကိုပေါက်ကို ခေါ်လာပြီး လုပ်ခိုင်းရတာ ..။ အချိန်ရှိခိုက် လိုလားတာလေးတွေ လုပ်ရမည် ။ စုတ်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ထဲက လိင်တန်ချောင်း တုတ်တုတ်
ကြီးကို မထုတ်ချင် ထုတ်ချင်နဲ့ ထုတ်လိုက်ရသည် ။
“ ကိုပေါက်..မမ တအားကို လိုချင်နေပြီကွာ…မမ အဖုတ်ထဲက လှိုက်လှိုက်ပြီးကို ယားနေတာ …”
ဒေါ်ရှယ်လီက သူ့ကို လက်ဆွဲပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားသည် ။
အိပ်ခန်းထဲမှာ ကျကျနန ခင်းကျင်းထားတဲ့ ကုတင်တလုံး ရှိနေသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီက သူ့ကို ကုတင်ပေါ်ကို တွန်းချလိုက်သည် ။ ပက်လက်အနေအထား နဲ့ ရှိနေတဲ့ သူသည် လိင်တန်ကြီး
မတ်မတ်ထောင်လျက် ရှိနေတာကို ဒေါ်ရှယ်လီ စိုက်ကြည့်ပြီး သဘောကျစွာနဲ့ တခစ်ခစ် ရယ်လိုက်သည် ။
သူမ ခါးက ထမိန်ကို ဖြေချွတ်ချလိုက်သည် ။ ပိုးပျော့ထမိန်လေး ဟုတ်ကနဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို အပုံလိုက် ကျသွားသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ပင်တီဘောင်းဘီရဲ့ ပေါင်ဂွဆုံနေရာက စိုကွက်နေသည် ။
“ ဒီတခါ မမ အပေါ်က နေမယ် …”
ပင်တီလေးကို အမြန်ချွတ်ချပစ်လိုက်ပြီး ဒေါ်ရှယ်လီ သူ့ကိုယ်ပေါ်က်ု ခွတက်လာသည် ။ ဒေါ်ရှယ်လီ တကိုယ်လုံး အ၀တ်မဲ့နေသည် ။ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းတဲ့ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး
ကိုယ်တွေကို သူ ငေးစိုက်ကြည့်မိတော့ သူ့လိင်စိတ်တွေ နိုးကြွပြင်းထန်လာပြန်သည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီလဲ ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ သူ့လိင်တန်ချောင်းနေရာမှာ ကိုယ်ကို ခွထိုင်လိုက်ပြီး လိင်တန်ထိပ်ဖူးပိုင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူမ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ကို တေ့ထောက်လိုက်သည် ။ စိုစိစိ အင်္ဂါစပ်
နှုတ်ခမ်းသားတွေကြားထဲကို လိင်တန်ထိပ်ပိုင်း ထိုးထောက်မိနေတဲ့အချိန် ဒေါ်ရှယ်လီသည် ခပ်ဖြေးဖြေး ဖိထိုင်ချလိုက်သည် ။
“ အီး…..တုတ်လိုက်တဲ့ လုံးပတ်….မမစောက်ပတ်တော့ ကွဲပလား မသိဘူး ….”
“ မကွဲပါဘူးမမရယ် …စောက်ပတ်နဲ့ လီး မတော်ဘူး မရှိပါဘူး ….”
ဒေါ်ရှယ်လီ ဖိဖိချပြီ …။ မြင်းစီးကောင်းဘွိုင်တယောက်လိုဘဲ .သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ခွစီးညှောင့်နေပြီ ..။
ပါးစပ်ကလည်း တအင်းအင်းတဟင်းဟင်းနဲ့ ။ အပေါ်က ဖိဖိချ တက်ဆောင့်ပေးနေတဲ့ သူမ ရင်သားစိုင် ထွားထွားကြီးတွေ တုံခါနေသည် ။ ခုံနေသည် ။ သူမခါးကို လက်တွေနဲ့ ထိန်းကိုင်ပြီး
အောက်ကနေ ပင့်ထိုးပေးသည် ။ မြိုင်ဆိုင်လှတဲ့ ကာမပွဲကြမ်းလေးတခုပါဘဲ …။
သူမစိတ်တိုင်ကျ တက်ဆောင့်ပြီး ပွဲသိမ်းတာဝန်ကိုတော့ ကိုပေါက်..အပြီးသပ်ပေးပါအုံး ဆိုပြီး ခိုင်းသည် ။
“ မမ လေးဖက်ကုန်းပေးမလား …” လို့ မေးလိုက်တော့ ရှောရှောရှူရှူ ဘဲ “ ရတယ်လေ..” ဆိုပြီး ဖင်ပူးတောင်းထောင် ပေးသည် ။ ဒေါ်ဂှယ်လီ့အင်္ဂါစပ်ကြီးက တဏှာအရှိန်ကြောင့် ဖြစ်မည် ။
ဖူးကြွခုံးမောက်နေသည် ။ အရေတွေကလဲ စိုပြောင်နေသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ့အင်္ဂါစပ်က အရေတွေကို လက်ဖဝါးနဲ့ ပွတ်သပ်ယူလိုက်ပြီး သူ့လိင်တန်ထိပ်ကို သုတ်လိမ်းလိုက်သည် ။အင်္ဂါစပ်ထဲကို ဖိသွင်းလိုက်သောအခါ ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ အီး…ဆိုတဲ့ အသံ
ထွက်လာသည် ။ သူ့လိင်တန်နီညိုညိုကြီး အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ၀င်ရောက်သွားတာကို ကြည့်ရင်း အသွင်းအထုတ်တွေ လုပ်သည် ။
“ အီး..ရှီး..ကောင်းလိုက်တာ..ကိုပေါက်ရယ်…လိုး…လိုး ….”
ဒေါ်ရှယ်လီ တောင်းဆိုနေပြီ ။
ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်သည် ။
“ အီးဟီး…..ဆောင့်…ဆောင့်..တအားဆောင့်ကွယ် …..”
တဖတ်ဖတ်တဖန်းဖန်းအသံတွေ ဆူညံနေပြီ ။
အားထည့်ပြီး ဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးသည် ။ တင်ကားကားကြီးနဲ့ ဖင်ပေါက်နီညိုညိုလေးကို ကိုင်တွယ်ကလိပြီး လုပ်ရတာ တော်တော် အရသာရှိသည် ။
ဒေါ်ရှယ်လီ အရင်ပြီးအောင် လုပ်ပြီးမှ သူက ဒေါ်ရှယ်လီရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို သုတ်ရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး လမ်းဆုံး ပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းရောက်ရှိသွားသည် ။ အိမ်အပြန်မှာ ဒေါ်ရှယ်လီက သူမလိုတာ ရသွားလို့ ကျေနပ်ပြီး မျက်စိပိတ်ခါ ထိုင်လိုက်လာသည် ။“ ကိုပေါက် …”
ဒေါ်ရှယ်လီ နိုးလာသည် ။
“ ဟင်..မမ ..”
“ ကိုပေါက်..ရွဲတို့မိသားစုနဲ့ ရန်ကုန်ကို လိုက်သွားမှာလား …”
“ မသိသေးပါဘူး ..တကယ်လို့ ဆရာက လိုက်သွားခိုင်းရင်တော့ ကျနော်လဲ မငြင်းချင်ဘူး …”
“ ကိုကျင်ဟုတ်ကတော့ သူ့ယောက်ဖ အတွက် ဆိုရင် သူလုပ်ပေးနိုင်တာ လုပ်ပေးမှာဘဲ ….အင်း..ကိုပေါက်ကို မမပြောချင်တာ တခု က မိုးပုလဲကို သတိထား..သူက ကိုပေါက်အကြောင်း
ကို မေးမေးနေတာ ၂ခါလောက် ရှိပြီ ….သူ ကိုပေါက်ကို သဘောကျနေလားမသိဘူး ..မိုးပုလဲက နံမည်ကြီးတယ်…ကောင်လေးတွေနဲ့ ဖြစ်တာ …”
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဦးကျင်ဟုတ်နဲ့ ရွဲရဲ့ မိဘတွေ ဘီယာနဲ့ ဝိုင် ထိုင်သောက်ရင်း စကားပြောနေကြတာ တွေ့ရသည် ။
“ ရှယ်လီ …အလုပ်အဆင်ပြေခဲ့လား ….လောခေါင်တို့ဆီက ရစရာ ရခဲ့လား ….”
“ ရခဲ့တယ် ..အားလုံး အိုကေပါတယ် ….”
ဦးကျင်ဟုတ်က ခေါင်းတညှိမ့်ညှိမ့် လုပ်နေသည် ။သူလဲ ဟိုတယ်ကို ပြန်ခဲ့သည် ..။
ရန်ကုန်ကို သူ ပါသွားပြီ ။ညနေ ခြောက်နာရီ တိတိ ..။
ဦးသုတ မရှိဘူး ။ သူဌေးကတော် ဒေါ်မိုးပုလဲကို ဧည့်ခံပွဲတခု လိုက်မောင်းပို့ရသည် ။
ဒေါ်မိုးပုလဲသည် တခါတရံလောက်ဘဲ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းသည် ။ များသောအားဖြင့် ယာဉ်မောင်း တယောက်ယောက်ကို မောင်းခိုင်းသည် ။
ဒီမှာ ဦးသုတအပြင် ယာဉ်မောင်း နှစ်ယောက် ရှိသေးသည် ။ သူတို့က အိမ်မှာ မနေဘူး ..။ မနက်ဆို အလုပ်လာဆင်းပြီး ညနေပိုင်းမှာ ပြန်သည် ။
အိမ်ဖေါ်မလေး ယုယု သူ့အခန်းကို ရောက်လာသည် ။
အသားမဲမဲ အရုပ်ဆိုးဆိုး ယုယု ကို တမင်ကလာ သူဌေးကတော် က ရှာဖွေပြီး ခန့်ထားတာ လို့ စားသောက်ရေးတာဝန်ခံ ဒေါ်စိုးစိုး က သူ့ကို တမနက် ဘရိတ်ဖာ့စ်သွားစားတဲ့အချိန်
“ ဘာလို့လဲ ဒေါ်စိုးစိုး…” လို့ သူက မေးကြည့်တော့..ဒေါ်စိုးစိုးက “ သူဌေး ရန်ကြောက်လို့ပေါ့..ကိုပေါက်…ယုယုကျတော့ သူဌေးက လှည့်ကို မကြည့်ဘူးလေ…အရင်က အိမ်ဖေါ်တွေ
တုံးက ဘိုက်ကြီးလို့ တောပြန်ပို့ ငွေထုပ်နဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့ရတာ…” လို့ ပြောပြခဲ့သည် ။သူ့အခန်းကို ပြန်ရောက်တော့ တဖက်ခန်းက ဦးသုတ က “ မောင်ပေါက်ရေ..ခဏ …” လို့ လှမ်းခေါ်သည် ။
“ ဘာလဲ အဘ….ဘာကျွေးမလို့လဲ ….”
ဦးသုတ က သူ့ရွာ က စားစရာတွေ လူကြုံနဲ့ ပို့ပေးလို့ ရလာတဲ့အခါ သူ့ကို ခေါ်ကျွေးနေကျမို့ မေးလိုက်တာ ..။ ဦးသုတတို့ ရွာက အုန်းထညက်သည် သူစားဘူးသမျှတွေထဲမှာ
“ ဘာမှ ကျွေးစရာ မရှိပါဘူးကွာ….မင်းကို တခု ပြောပြမလို့…သူဌေးက မန္တလေးကို နေ့လည်ထဲက ထွက်သွားတယ်…ဟို အန်းကူ ဆိုတဲ့ ယဉ်မောင်းအသစ်လေးကို မောင်းခိုင်းပြီး…
အဘက သူဌေးရဲ့ ညီမ မိသားစုကို ညဒင်နာတခု လိုက်ပို့ရမယ် …သူဌေးကတော် က ဒီည အပြင်သွားစရာ ရှိတယ် လို့ အဘကို မနေ့က ပြောထားတယ်..အကယ်လို့များ သူဌေးကတော်
အပြင်သွားခဲ့ရင် မောင်ပေါက်ဘဲ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါ လို့…”
“ ဟုတ်ပြီ..အဘ..စိတ်ချ …ကျနော် ပို့ပေးလိုက်မယ် ..”
“ အေး..အေး…ဒါဆို အဘ သွားမယ်နော် ..မောင်ပေါက် …”
“ ဟုတ်ကဲ့ အဘ….”
သူ့အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး ကုလားထိုင်လေးမှာ ထိုင်လိုက်ရင်း စိတ်တွေက နယ်မြို့လေးမှာ တယောက်ထဲ ရှိနေမယ့် အမေ့ဆီကို ရောက်သွားသည် ။
အမေ နေကောင်းရဲ့လားမသိဘူး ..။
သည် စစ်ဆင်ရေးကို လုပ်ဖို့ တာဝန်ပေးခံရတဲ့အချိန် အထက်လူကြီးက အမေနဲ့ ခဏ မဆက်သွယ်ဘဲ နေဖို့..အဖွဲ့အစည်းကနေပြီး အမေ့ကို လိုအပ်တာ အစစ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေး
ကြမည် လို့ ပြောသည် ။ သူ့ရဲ့ ဘ၀မှန်ကို ဖုံးကွယ်ထားရမှာကြောင့် အမေနဲ့ စစ်ဆင်ရေး အတွင်း စာမရေး သွားမတွေ့ဖို့ သေသေချာချာ မှာခဲ့သည် ။
သူနဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း ဇင်မင်း ကိုတော့အမေ့ကို လိုတာ ကူညီဖို့ သူ မှာထားခဲ့သည် ။
အဘဦးသုတ ထင်တာ မှန်သည် ။ ခြေသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ဖေါ်မလေး ယုယု လာတာ..။
“ အန်တီ က သူအပြင်သွားချင်လို့ ကိုပေါက် ကားမောင်းပေးပါ….တဲ့..”
“ ဟုတ်ပြီ….ဘာကားနဲ့ သွားမယ် ပြောသေးလား …”
“ ပြောတယ်…ကားအသစ်နဲ့ သွားမယ်…တဲ့ ”
“ အချိန်တော့ မပြောဘူး..မကြာခင်…တဲ့..”
သူ ထိုင်ရာက ထသည် ။
သူတို့မိသားစုက ရန်သူပေါများကြသည်မို့ ဖိုက်ပွဲတွေများ လာလေအုံးမလား ဆိုပြီး ပေါ့ပါးစွာ ခုန်နိုင် ကန်နိုင်တဲ့ ဘောင်းဘီမျိုး ပြောင်းလဲ ၀တ်ဆင်လိုက်သည် ။ ရန်ကုန်မြို့မှာ သေနတ်
ကိုင်ဆောင်ရတာ အင်မတန်မှ အန္တရာယ်များပေမယ့် လောလောလတ်လတ် ဦးကျော်သူရ ရဲ့ လူလေးယောက် ကို သူတို့ ဆော်ပစ်ခဲ့တာမို့ ရန်စက ကြီးမားနေဆဲ ဆိုတော့ အချိန်မရွေး
ရန်သူရှိနိုင်သည် ။ သေနတ်ကို ဖွက်ယူခဲ့လိုက်သည် ။
ကားအသစ် ဆိုတာ ဘယ်ကားကို ပြောမှန်း မသိဘူး ..။ ဂိုဒေါင်ထဲကို ရောက်တော့ သဘောပေါက်သွားသည် ။ ကားအသစ်ကြီးတစီး ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ရောက်နေသည် ။ ဒီနေ့ဘဲ ယူလာတာ
ဖြစ်မည် ။ ပြောင်လက်တောက်ပနေတဲ့ ကက်ဒလက်ကားကြီး …။
အသစ်ချပ်ချွတ်မှန်း သိသာသည် ။
ရန်သူများလို့ ကားပြောင်းစီးသလားတော့ မပြောတတ်ဘူး ။
ကားကြီးကိုစစ်ဆေး စက်နှိုးပြီး တိုက်ကြီးအရှေ့ တံခါးပေါက် တည့်တည့်မှာ ရပ်လိုက်သည် ။ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ကားမှာ ထင်နေတဲ့ လက်ရာတွေကို အ၀တ်စတခု နဲ့ သုတ်ပစ်နေ
တဲ့အချိန် သူဌေးကတော် ဒေါ်မိုးပုလဲ တိုက်ထဲက ထွက်လာသည် ။
သူ ကားအနောက်ခန်း တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး ဒေါ်မိုးပုလဲ ကားထဲ ၀င်ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန် တံခါးကို ပိတ်သည် ။ ကားထဲဝင်ထိုင်ပြီး စက်နှိုးသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲ ဘာပြောမလဲ နားထောင်သည် ။
“ မောင်း …”
ဘယ်ကို မောင်းရမလဲ ဒေါ်မိုးပုလဲ မပြောသေး …။
သူ ကားကို ခြံပေါက်ဝဖက်ကို မောင်းထွက်ခဲ့သည် ။ ခြံစောင့်တယောက်က ခြံတံခါးကို ပြေးဖွင့်ပေးသည် ။
လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်တော့ ဒေါ်မိုးပုလဲက “ ဘယ်လိုလဲ..ကားမောင်းလို့ကောင်းလား….မင်း ဘော့စ်က မမ အတွက် ၀ယ်ပေးတာ..အမေရိကားက မှာတာလေ …” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
“ အရမ်းကောင်းပါတယ်…မမ….” လို့ သူဖြေလိုက်သည် ။
“ ဟုတ်..မမ …”
“ မမလေ…ကိုပေါက်နဲ့အေး အေး ဆေးဆေး တွေ့ချင်နေတာ ကြာပြီ..ဟိုးနယ်စပ် မှာ စတွေ့ဖူးကထဲကဘဲ ဆိုပါတော့…ကိုပေါက်က ထူးခြားတယ် …ဒေါ်ရှယ်လီတို့ အိမ်မှာ နိမ့်နိမ့်ကျကျ
လုပ်ကိုင်ပေးနေရတာကို မမ စိတ်မကောင်းဘူး …”
ဒေါ်မိုးပုလဲ ပြောတာကို သူ နားထောင်နေသည် ။ သူ ဘယ်ကို မောင်းပို့ရမယ် ဆိုတာကို ဒေါ်မိုးပုလဲ မပြောသေးဘူး ။
“ ကိုပေါက် က အရမ်းပုံစံမိုက်တယ် …ကြည်ကောင်းတယ်…ပါးနပ်တယ်..သွက်လက်တယ် ….မမ ကိုပေါက်တို့ ဘော့စ်ကို ပြောရတော့တာဘဲ..ကိုပေါက်ကို ရန်ကုန်ကို ခေါ်ခဲ့ဘို့ ..”
“ မမ ကျနော် ဘယ်ကို မေင်းရမလဲ….”
“ အော်..အေးအေး..ဟုတ်သားဘဲ..မမ က ပြောဖို့ မေ့နေတာ..ဆောရီး…ဟို ..ဘာလဲ..ဘောက်ထော် ပြည်သာယာ ကို မောင်း..မမရဲ့ သူငယ်ချင်း ရွှေစင်အေးတို့ အိမ်ကို …”
ပြည်သာယာ ရပ်ကွက်ထဲက အသစ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကြီးမားခန့်ထယ်တဲ့ အိမ်ကြီးတွေ ဆီကို သူ ရောက်သွားသည် ။
“ ဟိုရှေ့က အိမ်ဘဲ..တံခါး အနက်ကြီးနဲ့….”
သူတို့ကားကြီး ခြံဝရောက်တာနဲ့ ခြံတံခါးကို ဖွင့်ပေးလို့ မောင်းဝင်ခဲ့သည် ။
ကားဆီကို ဖြူဖြူ ခန့်ခန့် မိန်းမတယောက် ၀မ်းသာအားရပုံနဲ့ ပြေးလာသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲက သူ တံခါး ဖွင့်ပေးတာကို မစောင့်တော့ဘဲ သူမဖါသာ တံခါးဖွင့်ဆင်းပြီး ပြေးကြိုတဲ့ မိန်းမနဲ့
တအား ဖက်သိုင်း နုတ်ဆက်သည် ။
“ မိုးပုလဲ ရယ်….မတွေ့တာ ကြာပြီ…လာ..အိမ်ထဲသွားရအောင် ….” ဒေါ်မိုးပုလဲ နဲ့ အိမ်ရှင် ဒေါ်ရွှေစင်အေးတို့ အိမ်ထဲ ၀င်သွားတော့ သူ ကားကြီးကို လွတ်ရာတနေရာမှာ ထိုးထားလိုက်
“ အကို …”
အသက်၂၀လောက် မိန်းကလေးတယောက် သူ့ကားနားကို လျောက်လာပြီး သူ့ကို ခေါ်လိုက်တာ ..။
“ အန်တီတို့က အိမ်ထဲ လာခဲ့ပါ …တဲ့…”
“ အေးေး..ကောင်းပြီ ….”
မိန်းကလေး က ဦးဆောင်ပြီး တိုက်ကြီးထဲကို ၀င်သည် ။ သူက မိန်းကလေးရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှအပတွေကို မသိမသာ အကဲခတ်ရင်း လိုက်ဝင်သည် ။ အိမ်ရှင်တွေရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု
တွေကို အိမ်ထဲ ၀င်လိုက်တာနဲ့ သိလိုက်သည် ။
နန်းတော်ကြီးတခုကို ရောက်သွားသလိုဘဲ …။
ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဒေါ်မိုးပုလဲ နဲ့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးတို့ ထိုင် စကားပြောနေကြတာ တွေ့ရသည် ။
“ လာ..ကိုပေါက် ..မိတ်ဆက်ပေးမလို့ …”
ဒေါ်မိုးပုလဲက သူသည် သူတို့လင်မယားရဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ လို့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးကို ပြောပြသည် ။ ဒေါ်ရွှေစင်အေးက “ဘော်ဒီဂတ်ပေါ့နော် ..ဟင်း..မိုးပုလဲရဲ့ ဘော်ဒီဂတ်ကလည်း
အမိုက်စား ပါလား ..ဒို့လဲ အဲလို ဘော်ဒီဂတ် တယောက်လောက် လိုချင်လိုက်တာ …” လို့ သူ့ကို ခေါင်းက ခြေထောက် ထိ သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်မိုးပုလဲ က “ ရှားရှားပါးပါး ရထားတာ..ခဏတောင် မငှားနိုင်ပေါင် ..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရွှေစင်အေး သည် အရမ်း ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးမ အပျိုကြီး လို့ ဒေါ်မိုးပုလဲက မိတ်ဆက်ပေးသည် ။
“ ကဲ..လာ ..မိုးပုလဲ…ထမင်းစားခန်းထဲ သွားရအောင် ..တခုခု သောက်ကြမယ်…” ဒေါ်ရွှေစင်အေး က သူနဲ့ ဒေါ်မိုးပုလဲကို ဧည့်ခန်းကြီး ဘေးက ကျယ်ဝန်း ခန်းနားတဲ့ ထမင်းစားခန်းကြီး
ဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲ နဲ့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးတို့သည် အလှချင်းပြိုင်နေတဲ့ မိန်းမချောတွေ လို့ ပြောရမည် ။
ချမ်းသာပေမယ့် ပျင်းမနေဘဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂရုစိုက်ကြပြီး ထိန်းသိမ်းကြပုံရသည် ။ နှစ်ယောက်စလုံး ကောက်ကြောင်းတွေက လှပနေသည် ။ ခါးသေးသေးအောက်က တင်ပါးကြီးတွေက
စွင့်ကား တင်းတောင့်နေကြသည် ။
“ ဘာသောက်မလဲ..ကိုပေါက် …ကြိုက်တာသောက် …”
အရက်ဘားလေး မှာ တန်ဖိုးကြီး နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်တွေ စုံနေသည် ။
“ ကျနော် က ကားမောင်းရမှာမို့ ဘီယာလောက်ပါဘဲ..မမ..”
ဒေါ်ရွှေစင်အေးက ရေခဲသေတ္တာကြီးထဲက တိုက်ဂါးဘီယာ တပုလင်းကို ထုတ်ယူပေးသည် ။ သူမနဲ့ ဒေါ်မိုးပုလဲတို့ကတော့ အကောင်းစား နိုင်ငံခြားဖြစ် ဝိုင်တလုံးကို သောက်ဖို့ ပြင်သည် ။
သူက အလိုက်တသိ ပုလင်းဖေါ့ဆို့ကို ဖေါက်တန်နဲ့ ရစ်ဆွဲယူကာ ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး မိန်းမချောနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖန်ခွက်လှလှ ရှည်ရှည်တွေထဲကို လောင်းထည့်ပေးလိုက်သည် ။
“ သိုင့်စ်..ကိုပေါက် ….”
သူ့ကို အထဲဝင်ဖို့ လာခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး က ဒိန်ခဲတုံး ဝါဝါလေးတွေကို ပုဂံပြား လှလှထဲ ထည့်ယူလာကာ သူတို့ရှေ့မှာ ချပေးသည် ။
“ အေးဘုံ …၀က်ပေါင်ခြောက် လဲ ယူခဲ့အုံးနော် ..”
“ ဟုတ်ကဲ့..အန်တီ ….”
ခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကလဲ အလန်းစား အဖြောင့်စား….။ အင်း..ငါလဲ မိန်းမလှကျွန်းပေါ် ရောက်နေသလား မသိတော့ပါဘူး …။ တွေ့ကြုံပတ်သက်သမျှ မိန်းမတွေက သူ့ဟာနဲ့ သူ လှနေ
ဒေါ်မိုးပုလဲ နဲ့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးတို့သည် စကားတပြောပြောနဲ့ ဝိုင်တပုလင်း ထပ်ဖေါက်ကြရပြီ ..။ သူကလဲ တတိယမြောက် တိုက်ဂါးဘီယာ ကို ဖေါက်သည် ။
“ ကိုပေါက်ရေ..ပျော်ရဲ့လား …”
“ ပျော်တယ်..မမ …”
ဒုတိယပုလင်းခါလီပြသွားတဲ့ အချိန် ဒေါ်ရွှေစင်အေး က “ မိုးပုလဲရေ…တနေရာရာကို ကားလျောက်မောင်းကြရအောင်ကွာ….” လို့ ပြောလာသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲကလဲ “ ကောင်းတယ် ..
ကိုယ်လဲ တော်တော့်ကို ဖီလင်တက်နေပြီ …ထွက်ကြရအောင်..ကိုပေါက်..ကားမောင်းနိုင်တယ် မဟုတ်လား …”
“ မောင်းနိုင်ပါတယ်..မမ.ဘီယာလေး သုံးလုံးထဲပါ …..”
စီးရတာ တအားငြိမ့်တဲ့ ကက်ဒလက်ကားကြီးထဲ အသက်လေးဆယ်အရွယ် မိန်းမချောနှစ်ယောက် နဲ့ သူ ရောက်ရှိသွားသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲက သူ့ဘေးက ခုံမှာ ထိုင်သည် ။ ဒေါ်ရွှေစင်အေး
က နောက်ခန်းမှာ ထိုင်သည် ။
“ ဘယ်ကို မောင်းရမလဲ.မမ ….”
ဒေါ်ရွှေစင်အေး လဲ တော်တော့်ကို ရေချိန်ကိုက်နေပုံရသည် ။ တခစ်ခစ်တဟားဟား အော်ရယ်ရင်း.“ .မောင်းချင်တဲ့နေရာကို မောင်းကွာ…လူမရှိတဲ့ တနေရာဆို ပိုကောင်းတယ် …”လို့
ပြောသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲက ..“ ယူ့လှော်ကားက ခြံကို သွားမလား ….” လို့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးကို နောက်လှည့်မေးလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရွှေစင်အေးက ..“ ဟင့်အင်း..ခြံစောင့် ဖိုးထောင်တို့ လင်မယား ရှိနေတယ်…မလွတ်လပ်ဘူး …လွတ်လွတ်လပ်လပ် တနေရကို သွားချင်တာ …” လို့ ပြောသည် ။
ဒေါ်မိုးပုလဲက တဟားဟားနဲ့ သဘောကျသည် ။
“ ဘာလဲ..ယူက ဒို့ ဘော်ဒီဂတ်ကို ခဏငှားမလို့လား ….” လို့ နောက်သည် ။
သူ ခုထိ ဘယ်ကို မောင်းရမလဲ မသိသေးဘူး …။
ဒေါ်မိုးပုလဲက..“ အင်း..ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့နေရာ . . .စဉ်းစား..စဉ်းစား …..အင်း..ဟုတ်ပြီ …..မြောက်ဒဂုံကို မောင်း..အဲဒီမှာ..ဒို့ ခြံတခြံ ၀ယ်ထားတယ်..လူစောင့် မရှိဘူး …တိုက်ကတော့
သိပ် မသားနားဘူး..နောက်မှ ပြန်ပြင်မလို့…အဲ့ကို သွားလိုက်..ကိုပေါက် …”
ဒီစော်ကြီးတွေ လူမရှိတဲ့ နေရာကို သွားချင်နေကြသည် ။ သူတို့က နှစ်ယောက် ..သူက တယောက် ..။ တူးအင် ၀မ်း …။ နှစ်ယောက် တယောက် တော့ တွေ့ကြပြီ …။
မြောက်ဒဂုံကို ဦးတည်လိုက်သည် ။ဒေါ်မိုးပုလဲ နဲ့ ဒေါ်ရွှေစင်အေး တော်တော်လေးကို အရှိန်ရနေသည် ။
ဒေါ်ရွှေစင်အေး က ဒေါ်မိုးပုလဲ ရဲ့ တိုက်လေးကို လိုက်ကြည့်နေသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲက တိုက်ထဲမှာ ပူလောင်နေသလိုဘဲ လို့ ညည်းရင်း အဲကွန်းစက်ကို ဖွင့်လိုက်သည် ။
ဒေါ်ရွှေစင်အေး က “ ဘယ်လိုလဲ..ထပ်သောက်ကြအုံးမလား သူငယ်ချင်း …” လို့ မေးသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲက ရယ်သည် ။ “ ကိုယ်တော့တော်ပြီ..သူငယ်ချင်း ထပ်သောက်ချင်သောက်လေ…
ဒီအိမ်မှာလဲ ဝိုင်ပုလင်းတွေ ထားထားတယ်….ဖရစ်ဂ်ျထဲမှာ..ရှိတယ် …” လို့ ပြောသည် ။
သူကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ဘာများခိုင်းမလဲ လို့ အမိန့်ကို နာခံလျက် ရပ်နေသည် ။ ဒေါ်မိုးပုလဲက “ သူငယ်ချင်း ယူအေးအေးဆေးဆေး နားချင်ရင် ဟိုအခန်းထဲ သွားနား..ညောင်းညာရင်
လဲ ကိုပေါက်ကို နှိပ်ခိုင်း…သူက ကောင်းကောင်း နှိပ်တတ်တယ် ….” လို့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးကို ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်ရွှေစင်အေးလဲ..ပြုံးလျက် “ ကောင်းသားဘဲ…ယူလဲ လာခဲ့လေ…စကားလေးဘာလေး အေးအေးဆေးဆေး ပြောရအောင်..အိမ်မှာက အိမ်ဖေါ်တွေ နဲ့ ဆိုတော့ သိပ် မလွတ်လပ်ဘူး..”
လို့ ပြန်ပြောကာ ဒေါ်မိုးပုလဲ ညွှန်ပြတဲ့ အခန်းထဲကို ၀င်သွားသည် ။ ဒေါ်ရွှေစင်အေးရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က တင်ပါးလှလှကြီးတွေ တလုံးချင်း အပေါ်အောက် လှုပ်သွားတာတွေကို
သူငေးမောနေမိခိုက် ဒေါ်မိုးပုလဲက“ ကိုပေါက်..လိုက်သွားလေ ..မမရွှေစင်အေး ကို နဲနဲပါးပါး နှိပ်ပေးလိုက်ပါလား…” လို့ ပြောလို့ အခန်းထဲကို ၀င်လိုက်သွားလိုက်သည် ။
“ ကိုပေါက်..မမကို တကယ် နှိပ်ပေးမှာလား …”
ဒေါ်ရွှေစင်အေး က ကုတင်ပေါ်မှာ တင်ပုလွှဲထိုင်လိုက်ပြီး အခန်းထဲကို ၀င်လာတဲ့ သူ့ကို ပြောလိုက်တော့ သူလဲ “ ဟုတ်ကဲ့ မမ …” လို့ ဖြေရင်း ဒေါ်ရွှေစင်အေး ထိုင်နေတဲ့ အနောက်မှာ
သူမလိုဘဲ တစောင်းဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။
“ မမ က တနေကုန် ကုမ္ပဏီမှာစာရင်းဇယားတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ ဇက်ကျော်တွေ တင်းနေတယ်..ကိုပေါက်ရယ် …နှိပ်ပေးရင်တော့ ကျေးဇူး အထူးပါ…”
“ ဟုတ်ကဲ့မမ ..ရပါတယ် …”
ဒေါ်ရွှေစင်အေး သည် လက်ပြတ် လည်ဟိုက် အကျ င်္ီလေး ၀တ်ထားသည် ဒေါ်ရွှေစင်အေး သည် အသက်လေးဆယ်အရွယ်ပေမယ့် ချောမော စိုပြေတုံးဘဲ ။ တောင့်တင်းတုံးဘဲ ..။
လက်မောင်းသား ပြည့်ပြည့်ဝင်းဝင်းလေးတွေနဲ့ လည်တိုင်ဖွေးဖွေး တွေက သူ့ကို စိတ်တွေ လှုပ်ရှား ဖေါက်ပြန်လာစေသည် ။
ကျောပေးထားလို့ ခါးသိမ်သိမ် အောက်က တင်ပါးကြီးတွေကို နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့နေရတာကလည်း စိတ်တွေ ထကြွစရာ…။
ပုခုံးသား နှစ်ဖက်ကို စပြီး နှိပ်ပေးလိုက်သည် ။
“ အင်း..အင်း….ကောင်းလိုက်ထာ …”
ဒေါ်ရွှေစင်အေး ရဲ့ အသံလေးက တော်တော့်ကို ချိုသည် ။
ဧည့်ခန်းဖက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်မိုးပုလဲ ကို မတွေ့တော့ ..။ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး သူမ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ မသိ ..။
ဒေါ်ရွှေစင်အေး သည် တအင်းအင်းနဲ့ သူနှိပ်တာကို သဘောကျနေသည် ။ ပုလုံးတေါကနေ ကျောပြင်ကို ဆင်းလာပြီး လက်သီးဆုပ်တွေနဲ့ ဖိပေး တွန်းပေးသည် ။
“ ထိလိုက်တာ..အဲဒီနေရာဘဲ..ကိုပေါက်..ညောင်းနေတာ ….”
ဒေါ်ရွှေစင်အေးက အိုအိုအင်းအင်း နဲ့ သူနှိပ်တာကို ကြိုက်ကြောင်း တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောနေသည် ။
“ မမ…အိပ်ရာပေါ် မှောက်လှဲလိုက်ပါလား..မမ ခါးကို နှိပ်ပေးမယ် …”
“ အင်း..အင်း ….”
ခေါင်းအုံးပေါ် မျက်နှာအပ်ရင်း ဒေါ်ရွှေစင်အေး မှောက်ရက် အိပ်ပေးလိုက်သည် ။ သူမခါးကို သူ တံတောင်ဆစ်နဲ့ ဖိဖိထောင်းပေး သည် ။
“ အိုး…အင်း…ထိလိုက်တာ..ထိလိုက်တာ…..အားပါး..ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ် . . . .”
ဇက်ပိုးနေရာကနေ ခါးအထိ လက်ဖနောင့်နဲ့ ပွတ်ခါ ဖိဆွဲပေးလိုက်ပြန်တော့ ဒေါ်ရွှေစင်အဖို့ ခံလို့ကောင်းလွန်းလို့ ထပ်ထပ် လုပ်ပေါးအုံးလို့ တောင်းဆိုရသည် ။
တော်တော်လေးကြာအောင် ကျောလည်ကို ပွတ်ဆွဲအပြီး..“ မမ..ပေါင်နဲ့ ခြေသလုံးတွေကိုရော နှိပ်ပေးရမလားဟင် …” လို့ သူမေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရွှေစင်အေး က ချက်ချင်းဘဲ..“ နှိပ်..
နှိပ်…မင်း သဘောရှိ နှိပ်ပေး….မမကို မေးစရာ မလိုဘူး…” လို့ ပြောသည် ။
ပေါင်တန်လှလှကြီးတွေနဲ့ ခြေသလုံးတွေကို နှိပ်ပေးနေတဲ့အချိန် သူ့လက်ဖျန်နဲ့ တတောင်ဆစ်တွေက ဒေါ်ရွှေစင်အေးရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေနဲ့ ပွတ်တိုက် ထိတွေ့မိနေသည် ။ ဒီ
အထိအတွေ့ကြောင့် သူ့စိတ်တွေ ပိုမို ထကြွလာရသည် ။ ပေါင်ရင်းပိုင်းကို လက်နဲ့ဆုပ်ညှစ်ပြီး နှိပ်ကေးရင်း တင်ပါးကြီးတွေကို ပါ ကိုင်ဆုပ်မိသည် ။ ဒေါ်ရွှေစင်အေး က ဘာမှ မပြော မငြင်း
ဘဲ ငြိမ်နေတာကြောင့် တင်ပါးကြီးတွေကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အားရပါးရ ကိုင်တွယ် ဆုပ်ညှစ်လိုက်..ပွတ်သပ်လိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်သည် ။
“ မမ..ပက်လက်လှန်ပေးမလားဟင် …”
သူပြောလိုက်တာနဲ့ဒေါ်ရွှေစင်အေးက “ အေး..အေး…ရတယ်လေ…” ဆိုပြီး ပက်လက်လှန်ပေးသည် ။ သူမ မျက်လုံးအစုံကိုတော့ ပိတ်ထားသည် ။
ပက်လက်အနေအထားနဲ့ သူမပေါင်တွေကို နှိပ်ပေးတော့ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ ဒေါ်ရွှေစင်အေး ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါစပ်နဲ့ အရမ်းကို နီးကပ်စွာ ရှိနေပြီ ..။ ၀မ်းဘိုက်သားချပ်ချပ်လေးတွေကို
ပွတ်လိုက် ပေါင်ရင်းကို နှိပ်လိုက်နဲ့ သူမရဲ့ ကာမခလုပ်တွေကို တခုပြီး တခု နှိပ်နေတော့ ဒေါ်ရွှေစင်အေး အခုလောက်ဆိုရင် မုချ စိတ်တွေ နိုးကြွနေလောက်ပြီ …။
ပေါင်ရင်းတဖက်ကို ဖိနှိပ်နေရင်း သူ့လက်သန်းလေး က မို့ဖေါင်းဖေါင်း အင်္ဂါစပ်ကြီးပေါ်ကို ထိပွတ်နေသည် ။
ဒေါ်ရွှေစင်အေး နုတ်ဖျားက “ အင်းဟင် …” ဆိုတဲ့ ညည်းသံလေး ထွက်ပေါ်လာသည် ။
သူက သွေးတိုးစမ်းတဲ့သဘော ..။ ဒေါ်ရွှေစင်အေး က ဘာမှ မတား မငြင်း..မရုန်းဖယ်တော့ လက်သန်းတချောင်းထဲကနေ လက်လေးချောင်းနဲ့ သူ ပွတ်စမ်းပြီ …။
“ အင်းဟင်း…အင်းဟင်း…….” ဒေါ်ရွှေစင်အေး ပေါင်တန်တွေ ထောင်လိုက် လှဲလိုက် ဖြစ်လာသည် ။
“ အင်..ကိုပေါက်..ဘယ်တွေ နှိပ်ပေးနေတာလဲဟင်….” လို့ မေးပေမယ့် မျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ဘူး…။ ရုန်းလဲ မရုန်းဘူး ..။ အခြေအနေကောင်းနေတာနဲ့ ထမိန်စလေးကို ဆွဲဖြေလိုက်သည် ။
သူမ ဘာမှ မပြောတာနဲ့ လက်သွင်းပြီး ၀မ်းဘိုက်သားလေးကို ပွတ်သပ်လိုက်သည် ။ ဟင်းဟင်းနဲ့ဘဲ ညည်းနေသည် ။ နှုတ်ခမ်းထူထူတစုံက ဟတတလေး ..။
လျောကနဲ အောက်ဖက်ကို လက်ဖဝါးက ဆင်းချသွားပြီး ဆီးခုံမို့မို့အပေါ်မှာ စမ်းမိတဲ့ အမွှေးလေးတွေကို ပွတ်သပ်ကြည့်နေသည် ။
“ ဟင့်..ဟင့်…သူ…သူ….ဘာတွေ..ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ…..”
အပျိုကြီး မမသည် အင်္ဂါစပ်နား ရစ်ဝဲနေတဲ့ သူ့လက်ဖဝါးကြောင့် ထိုးထိုးထွန့်ထွန့် ဖြစ်လာသည် ။
“ မမ တင်းကြပ်နေတဲ့ အပူတွေကို ထုတ်ပစ်ပေးမလို့ပါ….”
“ ကွယ်..အဲလို အပူထုတ်ရလို့လား …..”
“ အင်း..မမ တင်းနေတာတွေ ကို ကျနော် လျော့ပေးလိုက်မယ် …..”
သူကိုင်ပြီ …။ ဒေါ်ရွှေစင်အေးရဲ့ အင်္ဂါစပ်အကွဲကြောင်းကြီးကို မိမိရရ ပွတ်ပြီ …။
နှုတ်ခမ်းသား နုနုတွန့်တွန့်လေးတွေကို စမ်းပွတ်လိုက်သည် ။ အရေတွေ စိမ့်ထွက်လာသည် ။
သူ့လက်ချောင်းတွေမှာ ဒေါ်ရွှေစင်အေးရဲ့ ကာမရှေ့ပြေး အရေတွေ စိုစွတ်နေပြီ …။
အချိန်တန်ပြီမို့ ပြေနေတဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။
“ ဟယ် ….”
သူမကိုယ် အောက်ပိုင်း အ၀တ်မရှိတော့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးသည် တြိဂံပုံ အင်္ဂါစပ်ခုံးခုံးကြီးအပေါ် လက်ဖဝါးလေး ကာလိုက်သည် ။
“ မရှက်နဲ့..မမ ကို နမ်းပေးမလို့ …”
“ ဘယ်နေရာကို နမ်းမှာလဲကွာ…..”
“ မမ ပန်းပွင့်လေး ကို…”
ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အကြား နေရာ ယူလိုက်ပြီး ဒေါ်ရွှေစင်အေး ရဲ့ ဖေါင်းမို့နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို နမ်းရှံ့လိုက်သည် ။
“ အို..ကိုပေါက်ရယ် . . .”အရေတွေ ရွှဲနေတဲ့ ဒေါ်ရွှေစင်အေးရဲ့ ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့ ပစ္စည်းကြီးရဲ့ အကွဲကြောင်းကြီးကို သူ့နှခေါင်းနဲ့ အပေါ်အောက် စုံချီ ဆန်ချီ လိုင်းဆွဲပေးသောအခါ ဒေါ်ရွှေ